Socdaal Xalaal ah oo loo aado Toronto - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada u saaxiibtinimada Muslimiinta
Toronto waa magaalada ugu dadka badan Kanada iyo caasimada gobolka Ontario. Waxay ku taal xeebta waqooyi-galbeed ee harada Ontario. Toronto waxaa ku nool dad gaaraya 2.7 milyan, waana wadnaha Aagga Toronto (GTA) oo ay ku jiraan 6.4 milyan oo qof. Waxay sidoo kale xirtaa gobolka loo yaqaan 'Golden Horseshoe', oo ku wareegsan harada Lake Ontario laga bilaabo Toronto ilaa Niagara Falls oo wadarta guud ee dadka deggan ay tahay 9.2 milyan, ku dhowaad rubuc ka mid ah dadka Kanada oo dhan. Toronto waa magaalada afraad ee ugu weyn iyo magaalada shanaad ee agglomeration magaalooyinka waqooyiga Ameerika.
Goobtan oo laga soo saaray kaydadkii dabayl-wadaagga iyo wixii ka dambeeyay, aagga waxaa ku noolaa waqtiyo kala duwan Iroquois iyo markii dambe dadka Wyandot (Huron). Degitaankii reer Yurub wuxuu bilaabmay bartamihii 1700-meeyadii markii Faransiisku ka dhistay qalcado ay dhif ku qabsadaan agagaarka maanta Carwooyinka. Magaaladu waxay markaa ka soo kacday boosteejo ganacsi oo Ingiriis ah oo gadaal laga soo dhisay oo la aasaasay sida York sanadkii 1793 (oo dib loogu noqday magaca hadda loo yaqaan Toronto ee 1834). Dabayaaqadii qarnigii 19aad, waxay u kortay inay noqoto diiradda dhaqan iyo dhaqaale ee Kanada. Iyadoo ay ugu wacan tahay siyaasadaha soogalootiga xorta ah ee waddanka laga bilaabo 1960s, iyo dhaqaalaha gobolka oo xoog leh, Toronto waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu dhaqanka iyo qowmiyadaha badan adduunka. In ka badan 80 qowmiyado qowmiyadeed ayaa matala, in ka badan kala bar dadka magaalada degganna waxay ku dhasheen banaanka Kanada.
Markii Metropolitan Toronto la isku daray 1998, lixda degmooyinkeedii hore waxay noqdeen "magaalo-weyn" cusub. Toronto waxay ka kooban tahay xaafado kala duwan oo gaar ah. Isagoo daboolaya in ka badan 600 km², Toronto waxay ku fidsan tahay ilaa 32 km xeebta harada Ontario. Magaalada waxaa lagu dhejiyay qaab shabaqeed aad u toosan. Jidadku marar dhif ah ayey ka leexdaan shabakadda, marka laga reebo marka jaangoynta dhulka ay faragelinayso, sida wareegga Dooxada Don River, iyo in yar oo ka mid ah dooxooyinka Humber iyo Rouge ee ku yaal dhinacyada magaalada ka soo horjeedda. Jidadka waaweyn ee muhiimka ah qaarkood waxay gooyaan shabakadda xaglaha. Ujeeddooyinka safarka awgeed, waxaan u kala qaadnay Toronto laba iyo toban degmo:
Saldhigga cufan ee magaalada Toronto. Waxaa ku jira in badan oo ka mid ah soojiidashada magaalada iyo hudheelada.
Degmooyinka magaalada hoose ee Toronto
Wadnaha magaalada hoose ee Toronto oo ay weheliso Yonge St, Xarunta Eaton, tiyaatarada iyo Xarunta Dawladda Hoose.
Madadaalada iyo Degmooyinka Maaliyadeed
Madadaalada iyo wadnaha maaliyadeed ee magaalada, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah meelaha ugu caansan magaalada ee dalxiiska: CN Tower, Rogers Center (oo hore loo oran jiray SkyDome), Union Station iyo Hockey Hall of Fame.
Xaafado kala duwan oo leh dukaamo yaryar, suuqyo iyo maqaaxiyo badan, iyo baararka magaalada ugu caansan ee loogu talagalay muusikada tooska ah. Waxaa ku jira Boqoradda Galbeed iyo Degmada Dharka ee koonfurta.
Yorkville iyo lifaaqa
Dukaamada Yorkville iyo matxafyada iyo tamarta ardayda ee xaafadaha lifaaqa iyo Jaamacadda.
Koonfurta Magaalada Hoose, aaggan wuxuu caan ku yahay jardiinooyinkiisa iyo howlaha madadaalada. Ku soco dhinaca biyaha geeskeeda, ku dalxiis deked doon, waxoogaa reyre ah oo qoys ah munaasabado kala duwan oo ku yaal Meesha Bandhigga (“Ex”; oo ay ku jiraan Bandhigga Qaranka ee Kanada (CNE) Ogosto) ama qaado Kubadda Cagta ee Major League ama Canadian Football Ciyaarta horyaalka ee BMO Field.
Doomaha u qaado Jasiiradaha Toronto. Ku dhex lugee beerta nasashada, ku raaxee xeebaha, fiiri xayawaanka xayawaanka lagu raaxeysto, ku baashaal beerta madadaalada, arag guryaha cowska yar yar iyo jardiinooyinka barxadda hore ee bulshada jasiiradda joogtada ah.
Xaafadaha duugga ah ee u dhexeeya Church St iyo Don Valley. Waxaa ka mid ah Church & Wellesley (Tuulada khaniis ee Toronto), Cabbagetown, Suuqa St Lawrence, Old Town Toronto, iyo Distillery District.
Banaanka Bartamaha Toronto
Kuwani waa xaafadihii waaweynaa ee soo garaacaya faras magaalaha oo ay ku xigto giraan banaanka xaafadaha dagaalka ka dib. Halkan waxaa ku yar soo jiidashada, laakiin haddii aad waqti hesho, xaafadaha qaarkood ayaa mudan in la booqdo.
Degmooyinka dibedda ee Toronto
Bartamaha (Yonge & Eglinton, Davisville Village, Forest Hill)
Xaafadaha Upscale oo leh guryo waaweyn oo duug ah oo kuyaala magaalada lacagta leh iyo kuwa caanka ah, jardiinooyin qurux badan, iyo togag fidsan oo dhererkoodu yahay kiilomitir. Aagga ku hareeraysan Yonge & Eglinton wuxuu ku dhexjiraa isbadal deg deg ah oo udub dhexaad u ah magaalo u gaar ah.
West End (Little Italy, Portugal yar, West Queen West, Parkdale, Roncesvalles, High Park,)
Qaybaha qowmiyadeed, baararka quusitaanka, iyo hipsters ayaa ku badan qaybtan sida degdegga ah u sharraxaysa magaalada. High Park waxay ilaalisaa jeexan meel cagaaran oo ka timaadda Humber Bay illaa woqooyi illaa Bloor Street, iyadoo ka baxaysa nolosha magaalada ee buuqa badan.
Bariga Dhamaad (Greektown, Leslieville iyo Xeebaha)
Quinter-ka West End, beddel ka xasilloon, oo leh xaafado hoose iyo xeebo fiican. Aaggani wuxuu martigeliyaa xaflado qowmiyadeed iyo dhaqammo badan bilaha xagaaga. Xeebta, oo ku taal dhinaca Queen Street ee bariga Kingston Road, waxay ku nooshahay socod lugta usbuuca dhammaadka sannadka oo dhan, si ay u qaadato meheradaha yaryar ee nasiibka leh, iyo harada dabaysha xagaaga.
Xaafad dhaqaale ahaan kala duwan oo leh dhagaxyo qaali ah oo aan la ogaanin oo ku teedsan Bloor Street iyo agagaarka harada Mimico, New Toronto iyo Laanta Dheer.
Degmadani waxay inta badan ku taal hareeraha magaalada laakiin waxay leedahay wax siiya dalxiiska caadiga ah. Xarunta degmadani waa dabiicad magaalo ahaan aad u cufan, maadaama loogu talagalay inay u adeegto badhtamaha Magaalada hore ee North York.
Xaafadaha bari ee magaalada waxay leeyihiin waxyaabo badan oo la bixiyo, oo ay ku jiraan Scarborough Bluffs, Rouge National Urban Park, cunno qowmiyadeed oo dhab ah (oo la awoodi karo), iyo Beerta Xayawaanka ee Toronto.
Waxaa la bilaabay 1794, Wadada Yonge waa mid ka mid ah jidadka ugu faca weyn magaalada Toronto, laakiin in yar oo ka mid ah dhismayaasha hadda jira waxay soo jireen ka hor intaan la gaarin 1900. Waxay u kala qaybisaa magaalada bari iyo galbeed - nambar dariiqa waddooyinka bariga-galbeed waxay ka bilaabataa Yonge Street waxayna ku kordheysaa dhinac kasta. Gudaha Magaalada Toronto, Wadada Yonge waa qiyaastii 15 kiiloomitir (9.3 mi) dheer.
Yonge Street hoostiisa waxay maamushaa laanta bari ee Line 1 Yonge – University, oo u adeegta kudhowaad dhererka wadada Toronto. Waad ku kaxeyn kartaa wadadan haddii aad rabto (iska dhaaf inaad isku daydo inaad hesho baarkinka), laakiin habka caqliga leh ee sahaminta Yonge waa lugo, iyadoo la raacayo maalin TTC ah si lagugu dhex jiito meelaha aad rabto inaad aragto.
Ilaa 1999, Buugga Guinness ee Diiwaanada Dunida ayaa ku celceliyay sheeko xariirka magaalooyinka ee ah in Yonge Street ay tahay wadada ugu dheer adduunka, kana bilaabata dekedda Toronto ilaa Lake Superior, masaafo dhan 1,896 kilomitir (1,178 mi). Waxaa si khaldan loo qaatay in wadada loo yaqaan 'Yonge Street' ay wado dhererka buuxa ee wadada weyn ee gobolka 11 (runti, waxay kaliya socotaa masaafo dhan 88 kiiloomitir (55 mi) ilaa Barrie, Ontario oo ku taal harada Lake Simcoe). Si kastaba ha noqotee, khuraafaadka waxaa lagu xardhay khariidad naxaas ah oo la dhigay waddada dhinaceeda koonfurta-galbeed ee Wadooyinka Yonge iyo Dundas.
Halkan waxaa ku yaal sharaxaad kooban oo ku saabsan Wadada Yonge sida ay uga sii gudubto degmo kasta koofur ilaa woqooyi:
Harbourfront: Yonge Street wuxuu ka bilaabmaa cidhifka biyaha ee Harbourfront. Astaamo dherer dheer oo lugta ah oo ku yaal cagta jidka Yonge Street ayaa dhiirrigeliya khuraafaadka ah in Yonge Street ay tahay wadada adduunka ugu dheer.
Degmooyinka Maaliyadeed: Qaybta Yonge ee udhaxeysa Wadooyinka Hore iyo Boqorada waxay sii maraan Degmooyinka Maaliyadeed oo ay matalaan dhismayaal waaweyn oo xafiisyo ah, badankoodna waxaa la dhisay 1970-yadii ama wixii ka dambeeyay, laakiin dhowr jeer oo qurux badan ayaa ka reeban. Hadaad rabto inaad sifiican ugu daawato daaraha dhaadheer ee Degmada Maaliyadeed, uga soco dhanka galbeed Saldhigga Tareenka dhulka hoostiisa mara ee Boqortooyada ilaa geeska King iyo Bay Wadooyinka.
Yoonge-Dundas: Aagga u dhexeeya Boqorada iyo Dundas Streets waxaa ku badan Eaton Center oo laga dukaameysto iyo, Dundas Street, oo ah fagaaraha Yonge-Dundas Square. Dhinaca bariga waxay leedahay laba goobood oo waxqabad taariikhi ah, Tiyaatarka Ed Mirvish iyo tiyaatarrada Elgin iyo Jiilaalka Jiilaalka. Intaas waxaa sii dheer, Massey Hall wuxuu ku yaalaa dhanka bari dhanka Shuter Street. Laga soo bilaabo Kuleejka Street woqooyi ilaa Bloor Street, Yonge Street waxay u adeegtaa tafaariiqda heerka waddooyinka yar yar, inta badan dhismayaasha laba-ilaa-saddex dabaq ah oo guryo boqolaal sano ah. Ganacsiyada halkan ku yaal, waxay ka duwan yihiin silsiladaha waaweyn ee ku yaal koonfurta Gerrard Street, inta badan waa dukaamo yaryar oo madaxbannaan waxayna u adeegaan bulsho deggan oo deggan labada dhinac ee Yonge Street oo leh adeegyo sida dukaamo ku habboon.
Yorkville: Yonge Street waxay ka gudubtaa "Mink Mile" oo ku taal Bloor Street, oo ah dukaanno aad u qaali ah oo u dhow degmada Yorkville oo si siman u sarraysa.
Bartamaha: Magaalada Midtown ee magaalada Toronto waxaa lagu gartaa qaybo badan oo dukaamaysi / makhaayado ka kooban oo ka kooban inta badan dhismayaal laba dabaq ah oo leh dabaqyo dabaqa labaad ah. Jidka aada ee tareenada dhulka hoostiisa mara ee Rosedale, Summerhill iyo St. Clair, waxaad ku arki doontaa xoogaa aragti ah sida qaab dhismeedka Xaruntii hore ee Tareenka Waqooyiga Toronto iyo Balmoral Fire Hall oo la dhisay 1911. Isgoyska Eglinton Avenue wuxuu noqday barta xudunta u ah, u adeegaya sidii xarun cufan oo dhaadheer, ganacsi iyo xarun transit.
Waqooyiga York: Hoggs Hollow, oo ah waran dhaadheer oo ku teedsan parkland, Yonge Street ayaa u gudubta Waqooyiga York. Markaad dhaafto Wadada 401, dukaamadu waxay mar labaad saftaan Yonge Street. Si kastaba ha noqotee, waqooyiga Finch Avenue, Yonge Street waxay bilaabeysaa inay u ekaato hareeraheeda suuqyo tafaariiqle ah illaa ay ka tagto Toronto oo ku taal Steeles Avenue.
Sannadkii 1998, magaalooyinka Toronto, Scarborough, North York, Etobicoke, iyo York iyo Borough of East York waa la isku daray si loo sameeyo Magaalada Toronto ee hadda jirta. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan Metropolitan Toronto ama "the 416" ka dib lambarkeeda aagga (in kasta oo hadda ay jiraan lambarro aagag cusub ah, tirada ugu badan ee lambarrada taleefannada guryaha ee aagga Toronto ayaa weli ah "416") waxayna leedahay dad ka badan 2.6 milyan qof. In ka badan kalabar kuwan waxay ku dhasheen waddan kale oo aan ahayn Kanada: xaqiiqda ayaa u muuqata qof kasta oo soo booqda isla markaaba, maaddaama ay magaaladu leedahay xaafado badan oo firfircoon oo leh calaamado waddooyin ah oo ku qoran afaf badan.
Toronto iyo hareeraheeda hareeraheeda waxaa si wada jir ah loogu yaqaanaa aagga Greater Toronto (GTA). Bannaanka hareeraha magaalada ayaa sidoo kale loo yaqaan "905" ka dib ay lambarka aagga, in kasta oo koodhkan sidoo kale loo adeegsado Hamilton iyo Niagara Peninsula, oo ka bilaabmaya Cobourg iyo Colborne ee bariga illaa xadka Niagara Falls ilaa koonfur-galbeed. Aagga oo dhan oo ay ku jiraan Toronto waxaa loo yaqaan "Horseshoe Dahab" waxaana ku nool in ka badan 8 milyan oo qof. Fogaanta u dhaxaysa magaalooyinka aagga waxay noqon kartaa mid weyn markay isku fiddo, dibedda iyo xitaa ku soo wareegto dhammaadka galbeed ee Lake Ontario; gaadiidka dadweynaha mar walba waxtar uma leh inuu ka dhigo safar deg deg ah ama aan xuduud lahayn. Dad badan oo degan xaafadaha magaalada waxay ku tiirsan yihiin gawaarida gaarka loo leeyahay si ay u wareegaan.
Quraafaadyada caanka ah ee magaalooyinka ayaa leh in Qaramada Midoobay ay ku qiimeysay Toronto inay tahay "magaalada ugu dhaqamada badan adduunka". In kasta oo UN-ka iyo hay'adahoodu aysan caado u lahayn qiimeynta magaalooyinka, haddana waxaa xaqiiqo ah in Kanada ay tahay dal soo galooti ah, Torontona waxay si aad ah u muujineysaa tan. Hay'ad ka socota Qaramada Midoobay ayaa ku qortay Toronto inay tahay magaalada labaad ee kaliya magaalada Miami oo ah magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee ajaanibta ah, laakiin dadka degan Toronto waxay matalaan kooxo dhaqameed iyo luqado aad u tiro badan, taas oo la dhihi karo waa tan ugu wanaagsan ee lagu qiyaaso dhaqamada badan. Muhaajiriinta badankood ama waxay sii maraan Toronto iyagoo u socdaalaya qaybaha kale ee dalka ama waxay ku joogaan Toronto si joogto ah. Dad badan oo dibedda ku dhashay waxay isu tixgeliyaan inay yihiin Canadian sida ugu badan ee ku dhashay Kanada oo ay ku dhibi doonaan haddii si kale loola dhaqmo. Tani waxay gacan ka geysaneysaa isu-imaatinka guud ee dhaqanka ee ah Toronto maanta. Magaalada Toronto gudaheeda, kooxaha qowmiyadaha badankood waxay ka shaqeyn doonaan qaab dhismeedka bulshada Kanadiyaanka laakiin qaarkood wali waxay hayaan qaababkooda kala duwan sida luqadda, labiska (haddii ay ahaan lahayd munaasabadaha gaarka ah), caadooyinka, iyo cuntada.
Natiijadan mooska dhaqameed awgeed, Toronto waxay hoy u tahay xaflado badan oo qowmiyadeed sannadka oo dhan. Toronto sidoo kale waxay leedahay dhowr idaacadood oo ku baxa luqado kala duwan, iyo laba telefishan oo ku hadla luqado kala duwan. Magaalada Toronto waxay si rasmi ah ugu shaqeysaa 16 luqadood oo kala duwan halka Guddiga Transit-ka ee Toronto (transit-ka dadweynaha) ay leeyihiin khad gargaar oo ka hadlaya 70 luqadood. Xitaa dukaamada waaweyn ee waaweyn sida The Bay oo ku taal bartamaha magaalada Toronto ayaa si sharaf leh ugu xayeysiiya adeegga 9 luqadood. Lingua franca ee Toronto, si kastaba ha noqotee, wali waa Ingiriis.
Cimilada & Cimilada
Cimilada Toronto guud ahaan waxay ku jirtaa dhinaca qabow, waxaana la filan karaa xaalado isbeddela. Kaalay udiyaar garow jiilaalka: Jiilaalku waa qabow (heerkulku celcelis ahaan -3.8 ° C (25 ° F) Bisha 27aad), badiyaa waa daruuro, mararka qaarkood baraf iyo dabayl aan fiicnayn. Si kastaba ha noqotee, nooca qabow daran ee soo maray waqooyiga Kanada badanaa wuxuu socdaa wax aan ka badnayn dhowr maalmood markiiba. Magaalada waxay la kulantaa xagaa diiran oo qoyan oo celcelis ahaan sareysa 80 ° C (18 ° F) iyo mid hooseysa 65 ° C (30 ° F) bilaha Julaay / Ogosto oo leh fiidyo badan oo mugdi badan laakiin kuleyl aad u yar. Celcelis ahaan, heerkulku wuxuu ka sarreeyaa 86 ° C (12 ° F) kaliya XNUMX maalmood sanadkii, laakiin miisaanka hawo kulul ayaa inta badan la yimaada heerar qoyaan dhexdhexaad ah. Guga dambe / xagaaga hore iyo horaanta dayrta guud ahaan waxaa loo arkaa inay yihiin waqtiyada ugu wanaagsan ee la booqan karo cimilada iyo dad aad u yar, bartamaha xagaaga ayaa ah xilliyada dalxiis ee ugu sarreeya, laakiin booqdayaashu waxay ogaan doonaan in firfircoonida Toronto ay sii ballaaraneyso illaa xilliga qaboobaha iyadoo barafka lagu dhejiyo banaanka isla markaana la isugu geeyo dhismayaasha naadiga, iwm. Dhismayaasha guud ee Toronto ku dhowaad dhammaantood waa kuwo qaboojiyeyaal leh oo si buuxda u kululaaday.
Mararka qaar inta lagu jiro xilliga qaboobaha, duufaano daran ayaa dib u dhigi kara gaadiidka iyo howlaha magaalada maalin ama laba maalmood. Xilliga kuleylaha, onkodku kolba waqti ayey dhacaan, badiyaa waxay socotaa wax ka yar saacad.
Meelaha ku dhow bartamaha magaalada guud ahaan guud ahaan 1 ilaa 1.5 ° C way ka kululaadaan xilliga qaboobaha sababtoo ah saameynta jasiiradda kuleylka magaalooyinka. Sanadka inta ka hartay, aagagga ku dhow harada Ontario way ka diirimaadsan yihiin qiyaastii 1 ° C sababtoo ah saameynta dhexdhexaadka ah ee harada. Tani waxay si gaar ah caan u tahay bilaha Maarso iyo Nofeembar marka magaaladu hesho roob halka meelaha waqooyiga magaalada ka hooseeya ay helaan baraf.
Xarunta Macluumaadka Safarka ee Ontaariyo, 65 Front St W (gudaha Saldhigga Union; raac calaamadaha dhanka UP Express). M-Sa 8 AM-8PM, Su 10 AM-6PM.
Kooxaha isboortiga & garoomada
Toronto waxay leedahay dhowr koox oo waaweyn oo horyaal ah iyo kooxo isboorti oo yar yar:
Toronto Argonauts - Canadian Football League, oo ku ciyaaraya BMO Field oo ku taal barxadda Goobta Bandhigga.
Toronto Blue Jays - Horyaalka Kubadda Cagta ee Major League, oo ka ciyaara Xarunta 'Rogers Center' (oo hore loo oran jiray SkyDome, welina guud ahaan loogu yeero dadka deegaanka).
Toronto Maple Leafs - Horyaalka Qaranka ee Xeegada, oo ku ciyaaraya Scotiabank Arena (oo hore loogu yaqaanay Xarunta Air Canada Center).
Raadiyaha Toronto - Xiriirka Kubadda Koleyga Qaranka, oo ku ciyaaraya Arena Scotiabank.
Rock Rock - National Lacrosse League, oo ku ciyaaraya Arena Scotiabank.
Toronto FC - Major League Soccer, oo ku ciyaaraya BMO Field.
Toronto Guur - Horyaalka Mareykanka ee Xeegada (kooxda Maple Leafs ee kooxda Toronto). Ka ciyaar Ricoh Coliseum.
Toronto FC II - USL League One (kooxda Toronto FC reserve team); laga bilaabo 2019, TFC II wuxuu ku ciyaaraa xarunta tababarka TFC ee Downsview Park ee Waqooyiga York. League One runti waa horyaal heerka saddexaad ah; TFC II wuxuu ka dhacay heerka labaad, oo hadda loo yaqaan USL Championship, kadib xilli ciyaareedkii 2018.
York 9 FC - Koox kale oo kubbadda cagta ah, midkan ayaa bilaabaya inuu ciyaaro 2019 isagoo xubin aasaasi ka ah Horyaalka cusub ee Canadian. Waxay ku ciyaari doonaan guryahooda garoonka Alumni Field ee ku yaal dhismaha Jaamacadda York ee Waqooyiga York, laakiin waxay leeyihiin qorshooyin muddo dheer ah oo ay ku dhistaan ​​garoon u gaar ah oo ku yaal Gobolka York.
Toronto Wolfpack - Kooxda horyaalka Rugby-ga ee ka ciyaarta Horyaalnimada, heerka labaad ee Ahraamta horyaalka rugby-ga ee Britain, oo ay ku jiraan 10 koox oo ka socda England iyo mid ka socda Faransiiska. Sannadkii 2018, waxay si dirqi ah uga adkaadeen dalabkoodii ahaa inay u gudbaan heerka ugu sarreeya ee ah haramka la sheegay, Super League. Wolfpack ayaa ku ciyaaraya Lamport Stadium oo ku yaal xaafadda Liberty Village.
The Scotiabank Arena, 40 Bay St. Waxaa loogu yeeri jiray Air Canada Center (ama "Hangar") illaa iyo Luulyo 1, 2018.
The Xarunta Rogers, 1 Blue Jays Way. Badanaa waxaa lagu magacaabaa asalkeeda "SkyDome".
The Jardiinooyinka Caleenta Maple Leaf, 60 Carlton Street. Fagaaraha taariikhiga ah ee Toronto, geeska waqooyi -galbeed ee Carlton Street iyo Church Street ee Degmada Beerta ee Toronto; hadda loo beddelay supermarket -ka Loblaws iyo Xarunta Ciyaaraha ee Jaamacadda Ryerson, Xarunta Ciyaaraha ee Mattamy ee Jardiinooyinka.
The Xarunta Aviva, 1 Shoreham Drive. Dhismo tennis ah oo badanaa u adeegta xarun tababar, laakiin sidoo kale waxaa ku jira maxkamadda weyn ee garoonka oo had iyo jeer martigelisa riwaayado xilliyeed. Isticmaalka ugu caansan ee dhismahan waxaa loogu talagalay Canadian Open sannadle ah (oo loo kafaala qaaday sidii Rogers Cup), oo ah dhacdo heer sare ah oo labada ninba ah ee 'ATP World Tour' iyo 'WTA Tour' haweenka. Xarunta Aviva waxay martigelisaa dhacdada ATP sannado xitaa la tirtiray iyo dhacdada WTA sannado tiro aan tiro lahayn, oo lagu beddelayo Montreal labada xaaladoodba.
Pearson International waxay aragtaa taraafikada ugu badan iyo isku xirnaanta dhammaan garoomada diyaaradaha ee Kanada
Madaarka Caalamiga ah ee Pearson Toronto Magaalada Mississauga waxay qiyaastii tahay 30-50 daqiiqo oo baabuur ah oo ka timaadda magaalada hoose ee Toronto (iyadoo ku xiran taraafikada) waxaana u adeega inta badan shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah. Waxaa jira labo boosteejo: Terminal 1 wuxuu martigaliyaa dhamaan duulimaadyada Air Canada iyo kuwa kale oo yar oo caalami ah (inta badan Star Alliance) halka Terminal 3 ay martigaliso dhamaan diyaaradaha kale. Markay ka safrayaan Toronto International (iyo garoomada diyaaradaha kale ee waaweyn ee Kanada) ee ay aadayaan Mareykanka, socotada waxay mari doonaan soogalootiga Mareykanka iyo caadooyinka horay looga sifeeyay magaalada Toronto, waana inay ka baxaan waqti dheeri ah si ay tan ula xisaabtamaan. Gegada diyaaraduhu waxay leedahay adeeg internet internet oo bilaash ah.
Qodobka ugu muhiimsan wuxuu qeexayaa gaadiidka dhulka ee ka tagaya ama ka tagaya Toronto Pearson.
Porter Airlines waxay bixisaa shabakad xiriir ah oo ku baahsan bariga Kanada iyo waqooyi-bari Mareykanka iyadoo laga helayo saldhigooda Billy Bishop Airport
Diyaaradda Billy Bishop ee Magaalada Bartamaha Magaalada Toronto (badanaa loo yaqaan "Madaarka Jasiiradda" dadka maxalliga ah). Duulimaadyo gaagaaban oo keliya. Kireysteheeda ugu weyni waa Porter Airlines, oo ah shirkad xamuul ah oo gaagaaban oo ka shaqeysa diyaaradaha u kala goosha magaalooyin badan oo bariga Kanada ah (Ottawa, Montreal, Quebec City, Halifax iyo St. John) iyo qaybo ka mid ah Mareykanka (Boston, Chicago, New York / Newark, Washington, DC, Myrtle Beach iyo kuwo kale). Air Canada waxay adeeg siisaa Montreal. Porter wuxuu si xoog leh ugu dagaallamayaa saamiga suuqa waadna ka faa'iideysan kartaa adoo helaya qiimo jaban (oo inta badan ka hooseeya Westjet - haddii la ballansaday 2 toddobaad ama in ka badan ka hor) oo lagu daray cabbitaanno bilaash ah iyo qolka nasashada ee waxyaabaha raaxada leh.
Mid ka mid ah waxtarrada ugu weyn ee u duulaya Billy Bishop waa u dhawaanshaha bartamaha magaalada. Markii aad soo degto, toban daqiiqo gudahood ayaad ku imaan kartaa magaalada hoose. Tunnel ka hooseeya kanaalka ayaa ku geynaya magaalada. Adeeg doon bilaash ah ayaa sidoo kale sameeya isgoyska gaaban: waa 121 mitir oo kaliya, wadada ugu yar ee adduunka sida joogtada ah loo qorsheeyo. Waxay ka shaqeysaa inta udhaxeysa TCCA iyo dhulweynaha 15 daqiiqo kasta: arag jadwalka buuxa. Markay soo gasho berriga, baska xamuulka bilaashka ah wuxuu ku xiraa boosteejada tareenka Fairmont Royal York Hotel, oo ka soo horjeedda Union Station.
Gawaarida gawaarida ee TTC waxaa laga heli karaa socod gaaban oo woqooyi ah kana yimaada Terminalka doonta weyn. Marinka 511 Bathurst wuxuu adeeg ka bixiyaa waqooyiga Bathurst, saldhigga tareenka dhulka hoostiisa mara ee Bathurst. Marinka 509 Harbourfront wuxuu u socdaalaa bariga dhanka webiga (Queens Quay) ilaa Saldhigga Midowga. Labada waddoba waxay ku egyihiin masaafo gaaban galbeedka dhanka Bandhigga. Si kastaba ha noqotee, isku xirka ugu habboon ee tareenka TTC iyo adeegyada Trans Transit waa marinka bilaashka ah ee Saldhigga Union.
Garoonka Caalamiga ee Hamilton, oo qiyaastii 80 km u jirta magaalada hoose ee Toronto iyo Niagara Falls, waxaa u adeega WestJet iyo CanJet. Ka eeg qaybta garoonka diyaaradaha ee John C. Munro Hamilton wixii ku saabsan gaadiidka dhulka oo ay ku jiraan basaska taga Toronto.
Socdaalka tahriibka ee ka imanaya Maraykanka, Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Buffalo-Niagara, (), waa ikhtiyaar kale. Duulimaadyada Buffalo waxay u muuqdaan kuwo si aad ah uga jaban kan Pearson, laakiin markaa weli waa inaad tagtaa Toronto. Megabus, Adeegga tababaraha nooca duulimaadka oo leh qiimo kala duwan oo loo baahan yahay ballansi hore, wuxuu socdaa bas maalinle ah oo qaadanaya 3 saacadood, oo ay ku jiraan ka gudubka xadka. Dhowr hay'adood oo ah kuwa gaarka loo leeyahay ayaa halkaas kuugu kaxayn doona lacag (badanaa $ 200, siin ama qaata), ama gawaarida kirada ah ayaa laga heli karaa garoonka diyaaradaha haddii aad doorbideyso inaad baabuurka wado.
Waxa jira laba boosteejo oo basaska laga raaco oo ku yaal bartamaha magaalada Toronto:
Terminalka Tababaraha Toronto, 610 Bay Street (woqooyiga woqooyiga Dundas St W; isku xirka dhulka hoostiisa iyo saldhiga tareenka ee Dundas iyadoo loo sii marayo mall Atrium; sidoo kale wuxuu kudhowyahay saldhiga tareenka ee St. Patrick ee Jaamacadda Ave). Terminalka baska ugu weyn magaalada Toronto ayaa u adeega Diiqa xarragoonaya, Megabus, Wadooyinka tareenka iyo Ontaariyo Northland. Terminal-ka wuxuu leeyahay laba dhisme: Terminalka Bay Street ee bixitaanka iyo Elizabeth Street terminal ee loogu talagalay imaanshaha ka soo horjeedka wadada. Terminalka Bay Street wuxuu leeyahay tigidhada tigidhada (Greyhound iyo Megabus) oo yeelan kara 20-daqiiqo oo saf ah xilliyada mashquulka badan. Terminalka Bay Street wuxuu siiyaa shandado boorsooyin loogu keydiyo maalintii ($ 5 / kabadh). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Boosteejada basaska ee Union Station, 141 Bay St (dhinaca bari ee Saldhigga Isbahaysiga oo ay ku xiran tahay buundo ka kacaysa Bay St). Terminalka Baska ee Union Station ayaa u adeega Gaadiidka kala soco iyo Tababaraha Can-ar basaska isku xira adeegyada tareenka iyo xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara ee TTC Union (Line 1). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Halkan waxaa ku yaal liistada boosteejooyinka yar-yar iyo joogsiyada qaybaha kala duwan ee magaalada. Ka hubi bogga Wikipedia liistada marinnada basaska ee u adeega goob kasta.
Terminalka Baska Yorkdale (ka soo gudub buundada caga dhigga ee laga raaco tareenka dhulka hoostiisa mara ee 'Yorkdale Line 1). Gaadiidka kala soco tigidhka tikidhada basaska ee garoonka diyaaradaha caalamiga ee Toronto Pearson, Mississauga, Milton, Brampton iyo Oshawa; Ontaariyo Northland basaska aada North Bay iyo Timmins; Greyhound Kanada basaska taga Barrie iyo Sudbury. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Terminalka Baska York Mills (saldhigga tareenka dhulka hoostiisa mara ee York Mills khadka 1). Gaadiidka kala soco basaska aada Mississauga, Milton, Brampton iyo Oshawa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Terminalka Baska Finch (oo ku dhagan saldhigga tareenka ee Finch khadka 1). Gaadiidka kala soco basaska aada garoonka diyaaradaha caalamiga ee Toronto Pearson, Mississauga, Milton, Brampton, Keswick iyo Oshawa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Saldhigga Basaska ee Xarunta 'Scarborough Center' (Xarunta Scarborough Center ee tareenka dhulka hoostiisa mara 3). Gaadiidka kala soco ilaa Oshawa; Tababaraha Can-ar ilaa Haliburton Highlands; Megabus ilaa Montreal; Greyhound Kanada Ottawa. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Greyhound Kanada ' waxay adeeg siisaa magaalooyinka u dhow sida Kitchener, Guelph, Barrie, Peterborough, St. Catharines iyo Niagara Falls iyo sidoo kale jidad dhaadheer oo bari loo aado Ottawa iyo Kingston (Ontario); koonfur dhanka Buffalo iyo magaalada New York iyo dhanka galbeed ilaa London, Windsor, Detroit iyo Chicago. Xusuusin: Adeegyada Greyhound Canada ee Waqooyiga Ontario galbeed ee Sudbury iyo Galbeedka Kanada waa la joojiyey ilaa Oktoobar 31, 2018, oo ay ku jiraan adeegyada Sault Sainte Marie, Thunder Bay, iyo Winnipeg.
Megabus (Tababar Kanada) waxay basas ka raacaan Toronto ilaa Kingston (3 saac) iyo Montreal (7 saac); Hamilton iyo Niagara Falls (1½ hr); ilaa Buffalo (2½ hr), Magaalada New York (10½ hr), iyo Washington DC. Megabus waxay ku faantaa wi-fi iyo fiilooyin koronto oo basaskeeda badan.
Ontaariyo Northland waxay adeeg ka bixisaa / ka timaaddaa waqooyiga Ontaariyo: Barrie, North Bay, Parry Sound, iyo Sudbury iyo magaalooyin yaryar oo socda. Xiriirinta waxaa laga heli karaa Sudbury iyo Waqooyiga Bay ilaa qaybaha kale ee Waqooyiga Ontaariyo
Tababaraha Can-ar wuxuu leeyahay 2 wadiiqo oo loo qorsheeyay. Hal wado ayaa u adeegta Orangeville, Kincardine iyo Port Elgin. Midda kale waxay u adeegtaa Port Perry, Lindsay iyo Haliburton.
Wadooyinka tareenka waxay bixisaa adeeg u dhexeeya Toronto iyo Magaalada New York oo joogsada Niagara Falls (Ontario).
Gaadiidka wuxuu u raraa kooxo dad ah dhamaan Ontario gudaheeda iyo Buffalo iyo Montreal.
Gaadiidka kala soco (shabakadda) waxay maamushaa baska iyo tareenka raaca / safarka gobolka ee gudaha iyo agagaarka aagga Greater Toronto. Basaska GO Transit waxay xiriir ka sameeyaan magaalooyin badan oo dhow oo ay ka mid yihiin: Oshawa, Peterborough, Hamilton, Niagara Falls, Barrie, Guelph, iyo Kitchener.
Midowga Station, 65 Front Street West (inta udhaxeysa Bay St iyo York St). 5:30 AM-12:45AM ama ilaa tareenka ugu dambeeya. Waxaa laga furay 1927, Saldhigga Midowga ee Toronto waa mid ka mid ah kuwa ugu waawayn uguna caansan, tareennada laga raaco Waqooyiga Ameerika, oo leh saqafka weyn ee Hoolka weyn oo u kacaya dherer u dhigma toddobo sheeko. Grand Hall wuxuu qaadaa tigidhada tigidhada VIA Rail wuxuuna siiyaa marinnada tareennada VIA iyadoo loo marayo laanta VIA Concourse. Ku Xarunta Union Pearson Express waa 250 mitir galbeedka Hoolka Weyn iyada oo loo marayo marin lugeynaya oo lugeynaya. Wadahadalka GO York ee heerka hoose ee galbeedka (York Street) dhamaadka saldhigga ayaa leh tigidhada tikidhada GO Transit iyo marin u helka aaladaha tareenka ee GO. (Maxkamad raashin waxay ku taalaa meel ka hooseysa Wadada GO York.) Terminalka Basaska ee Union Station wuxuu dhanka bari kaga beegan yahay Bay Street taas oo laga mari karo marinka dusheeda. Saldhigga tareenka ee TTC Union wuxuu ku yaal woqooyi-bari geeska weyn, wuxuuna u adeegaa tareenka dhulka hoostiisa mara ee 'Line 1' iyo 509 & 510 streetcars ee mara degmada Harbourfront.
Kuwa soosocda waa adeegyada tareenka ee ka shaqeeya saldhiga Union:
Tareenka VIA waxay leedahay tareenno badan oo iskuxidh ah oo ka shaqeeya Union Station oo ay ku jiraan Canadian-ka ilaa Vancouver anf The Maple Leaf to New York City.
Gaadiidka kala soco (websaydhka) wuxuu shaqeeyaa 7 khad tareen oo rakaab ah oo ka baxa Toronto oo u adeegaya magaalooyin yaryar oo ku yaal agagaarka iyo agagaarka Greater Toronto. Khadadka Lakeshore West iyo Lakeshore East waxay shaqeeyaan maalin kasta laga bilaabo 5:30 AM ilaa 12:30 AM inta u dhaxaysa Burlington iyo Oshawa. Saddex sadar oo kale ayaa xadidan adeegga maalinta-dhexe ee Unionville (Markham), Aurora iyo Brampton. Meelaha kale ee loo maro tareenka waxay leeyihiin saacad ciriiri ah, adeegga jihada ugu sarreysa.
Midowga Pearson Express waxay tareenka u raacdaa Toronto Pearson International Airport 15-kii daqiiqaba mar.
Adeegyada Tareenka ee VIA
Inta badan safarka tareenka isgaarsiinta gudaha Kanada waxaa bixiya Tareenka VIA. Saldhigga Union waa mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee VIA Rail wuxuuna isku xiraa dhowr khadkooda. Khadadka Tareenka ee ay maamusho VIA Rail ee ka baxa Saldhigga Midowga waxaa ka mid ah:
Wadada—Tani waa khadka ugu mashquulka badan ee VIA oo ka socda Windsor iyo Sarnia ee koonfur-galbeed illaa magaalada Quebec ee waqooyi-bari. Tareenada caadiga ah waxay toos uga baxaan Toronto si toos ah Montreal, Ottawa, London, Kingston, Windsor, iyo Sarnia iyo waliba saldhigyo u dhexeeya. Khadadka u dhexeeya Toronto, Ottawa iyo Montreal waa kuwa ugu mashquulka badan uguna badan VIA; sidoo kale waxay leeyihiin qiimo dhimistii ugu ballaarneyd haddii horay loo sii ballansaday. Waxaa jira fasalo badan oo adeeg ah, oo ay ku jiraan ganacsiga iyo dhaqaalaha. Dhammaan waxay ku kacayaan in kabadan isla safarka baska ama mootada gaarka loo leeyahay. Si kastaba ha noqotee cararidda qiimaha (xaddidan oo iib ah; aan la soo celin karin, 50% ganaax sarrif ah) ayaa noqon kara run ahaantii raqiis ah (ugu yaraan $ 44 laga bilaabo Ottawa / Montreal). Ololeyaal xayeysiin kala duwan ayaa sidoo kale ka dhigi kara tareenka ikhtiyaar soo jiidasho leh. Fasalka ganacsiga waxaa ku jira cunno iyo cabitaanno aalkolo leh. Ma jiro tareen toos ah oo ka baxa / ka yimaada Magaalada Quebec: isku xirka waa in laga sameeyaa Montreal.
Maple Leaf- Adeeggan waxaa si wada jir ah u wada VIA iyo shirkadda tareenka rakaabka ee Mareykanka, Amtrak. Tareenada qadkan waxay maraan inta udhaxeysa Toronto iyo New York City hal mar maalintii jiho walbana waxay istaagaan Albany, Syracuse, Rochester, Buffalo, iyo xarumo badan oo yar yar. Tareenada u dhexeeya Toronto iyo New York waa kuwo aad u gaabis ah oo aad qaali u ah - adeegyada tababaraha ee kor ku xusan guud ahaan waxay qaataan dhowr saacadood ka yar kana qiimo jaban dhowr jeer tareenka. Qiyaastii 2 saacadood ayaa lagu qaataa xadka. cararidda qiimayaasha sidoo kale lagama heli karo tareenkan.
Kanadiyaanku- wadada transcontinental ee ka timaadda Toronto illaa iyo Vancouver. Tareenadu waxay socdaan labo-saddex jeer usbuucii waddo kasta, waxayna istaagaan saldhigyo badan oo yaryar oo jidka ku jira, oo ay ka mid yihiin: Sudbury, Sioux Lookout, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Jasper iyo Kamloops. Safarka buuxa wuxuu qaadanayaa 3½ maalmood. Tani waa mid ka mid ah safarada tareenka ee ugu qaalisan Waqooyiga Ameerika waana marar badan oo ka qaalisan duulista. Si kastaba ha noqotee, safarka tareenka ee Kanada wuxuu socdaa 'heshiisyo dhakhso leh' 2-3 toddobaad ka hor safarka taas oo yareyn karta qiimaha 75 boqolkiiba. cararidda qiimayaasha (eeg kor) sidoo kale waxay bixiyaan qiimo dhimis qoto dheer. Tareenadu waxay kakooban yihiin hurdo hurdo iyo qol yar, iyo waliba fadhiisiga dhaqaalaha. Saddex cunno maalintii ayaa lagu kariyaa gaariga cuntada ee tareenka. Kuwani waxay ku jiraan qiimaha tikidhada hurdada waxaana loo heli karaa iibsashada rakaabka dhaqaalaha.
Waqtiyada safarka (oo ay ku jiraan isgoysyada xuduudaha iyo hakadka) iyo kharashyada (dhaqaalaha, tanaasulaad la'aan, dallacsiin, ama baxsado tareenka:
Bartamaha Kanada: Niagara Falls: 2 saac, $ 44; London 3 saac, $ 73; Windsor 4 saac 15 daqiiqo, $ 83; Ottawa 4 saac 30 daqiiqo, $ 114; Montreal 5 saac, $ 115; Sudbury: 7 saac 15 daqiiqo, $ 103
United States: Buffalo 4 hr 45 daqiiqo, $ 95; Rochester 6 saac, $ 117; Syracuse 7 saac $ 133; Albany 10½ hr, $ 183; Magaalada New York: 13½ hr, $ 214
Galbeedka Kanada: Winnipeg 35 saac, $ 383; Saskatoon 50 saac, $ 488; Edmonton 58½ hr, $ 570; Jasper: 63 saac, $ 643; Vancouver 87 saac, $ 779.
Wadooyinka waaweyn ee gala Toronto waa Queen Elizabeth Way (QEW), 404, 401, 400, iyo 427. Toronto waa magaalada ugu weyn Kanada, marka calaamadaha kuu tilmaamaya Toronto waa wax caadi ah. Gaadiidka waddooyinka waaweyn soo gala waxay noqon karaan kuwo aad u culus. Bartamaha magaalada waxaa ku yaal xayiraad fara badan, gaar ahaan laga bilaabo jidadka waaweyn ilaa jidadka kale ee muhiimka ah (tusaale Yonge ilaa Dundas Streets). Kanada waxay kaxaysaa dhinaca midig.
Wadooyinka waaweyn ee magaalada Toronto waxaa loo dejiyay qaab shabag ah oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu fudud ee baabuur lagu dhex maro. Inaad meel uga soo kacdo barta illaa meel kasta oo magaalada ka mid ah waxaa lagu gaari karaa iyadoo dhowr jeer oo keliya loo rogo. Gawaarida la dhigto bartamaha magaalada waxay noqon kartaa mid qaali ah oo adag in la helo, laakiin waa mid badan oo raqiis ah ama bilaash ku ah magaalada inteeda kale.
Toronto waxay raacdaa qaar ka mid ah xeerarka la xiriira nidaamka taraafikada ee badanaa jahwareeriya ama ka yaabiya darawallada booqashada:
Haddii basku muujinayo ujeedo ah inuu ku dhex milmo taraafikada joogsiga, waa inaad u dhiibataa baska.
Wadooyinka (taraamyada) - dhowr xeerar iyo caadooyin ayaa la ilaaliyaa; sharciyadan ayaa aad ugu yaqaana wadayaasha yurub, halkaas oo taraamyadu ay caan ku yihiin, laakiin guud ahaan darawalada meel kale oo Waqooyiga Ameerika ka yimaadda lama yaqaan:
Haddii gaari waddo ah oo hortaada ah oo aad u safarto jihadaada ay albaabbadeedu furan yihiin, sharci ahaan ma dhaafi kartid albaabbada furan, khatarta ay leedahay rakaabku inay ka baxaan oo ay raacaan. Badanaa (gaar ahaan inta lagu jiro saacadaha ciriiriga ah ee la filayo in dad aad u tiro badan), rakaabku waxay u bixi doonaan wadada ka hor inta uusan baska istaagin istaag buuxa, iyadoo la filaayo in albaabadu furmaan. Xaaladdan oo kale, waa caado in la joojiyo, maaddaama dad badan oo rakaab ah ay waddada ku dul-wareegi karaan ilbidhiqsiyo gudahood, qaarkoodna way ku dhiirran karaan inay ka baxaan jidka. Haddii gaari wadid uu ku ag jiido gaarigaaga inta laguu joojinayo, oo uu furo albaabadiisa, waa inaad ahaataa mid taagan ilaa albaabadu ka xirmayaan. Baaskiilleyda wadada joogta waxay si joogto ah u diidaan sharciga joojinta, maaddaama ay guud ahaan la jaan qaadi karaan hareeraha dadka, laakiin waxaa ugu fiican dhaqanka in la joojiyo, iyadoo la tixgelinayo rakaabka.
Si kastaba ha noqotee, haddii jasiiradda taraafikada (waxay umuuqan doontaa dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh hoyga taraafikada dusha sare) oo ka soocaya baska jidkaaga, waxaad ku dhaafi kartaa taxaddar. Ka taxaddar jaywalkers oo aan sugin illaa iftiinka isbeddelayo inuu ka gudbo haadka.
Marka lagu jiro taraafikada isku dhafan, jidadka basaska ayaa ku yaal laynka dhexe ee wadada. Baabuurta waddooyinka ayaa marmar toos ah ka sameeya haadkaan; Baabuurta kale guud ahaan looma oggola inay sidaas sameeyaan (marka laga reebo baabuurta waaweyn), waxaana muhiim ah in la bixiyo oggolaansho si leexashooyinka loo sameeyo, ha ahaadeen kuwo u socdaalaya jihada waddada ama mid soo socda. Wareegyadan waxaa lagu calaamadiyay xariiqyo cadcad oo dhibco leh oo raacsan dusha qalooca, taas oo tilmaamaysa inta uu gaadhi -waduhu leexanayo.
Gawaarida gawaarida waa inay midig u leexdaan markay safraan dhowr meelood oo jidka King Street ah inta u dhaxeysa Jarvis Street iyo Bathurst Street. U fiirso calaamadaha. Iyadoo loo marayo taraafikada aaggan waxaa loo oggol yahay oo keliya gawaarida waddooyinka iyo baaskiiladaha.
Mararka qaarkood haadka safarka ugu saxsan ee jidadka qaarkood (gaar ahaan Bay Street inta udhaxeysa Front iyo Bloor Sts. Iyo waliba halbawlayaasha halbawlayaasha u ah ee ka baxsan xudunta magaalada) waxaa loo qoondeeyay 7 AM-7PM gawaarida transit-ka, tagaasida iyo baaskiilada kaliya; wadiiqooyinkaas waxaad ka geli kartaa oo keliya inaad u leexato dhinaca midig ee isgoyska xiga. Haddii aad go'aansato inaad u safarto adigoo maraya taraafikada waddooyinkan, waxaa lagaa qaadi doonaa ganaax.
Intaa waxaa sii dheer, xusuusnow in reer Torotoonku guud ahaan ay qaadaan waajibaadkooda ah inay si ballaaran u siiyaan gawaarida gurmadka si dhab ah: haddii aad maqasho seeriga ama aad aragto laydhadhka, u leexo dhinaca wadada si ammaan ah laakiin si dhakhso leh.
Maaddaama Toronto ay tahay magaalada ugu weyn Kanada, waddooyinka waaweyn ee waaweyn waxay dhex maraan magaalada, waana sahlan tahay in la helo calaamado muujinaya inaad ku socoto jihada saxda ah. Si kastaba ha noqotee, taraafikada waddooyinka waaweyni waxay noqon karaan kuwo culus, iyo bartamaha magaalada, meelaha baabuurta la dhigto inta badan waa qaali oo way adag tahay in la helo. Dhinaca kale, jidadka waaweyn ee magaalada Toronto waxay leeyihiin qaab shabaqaysan oo ka dhigaya wadista baabuurku mid fudud.
Sidoo kale, marka la eego baaxadda magaalada, dhowr meelood ayaan ku filneyn nidaamka gaadiidka dadweynaha. Xaafadaha magaalada dibaddeeda ah, qof walba wuxuu adeegsadaa gaari gaar loo leeyahay. Tani waa sababta jidadka waawayn ay u dhibaatoodaan cidhiidhiga taraafikada maalin kasta, ku dhowaad maalintii oo dhan, wayna kasii daraysaa inta lagu jiro saacadaha degdegga: xitaa 401, oo leh 9 wadiiqo dhan kasta, way gaabis tahay saacadahaas.
Safarka loo tegayo jasiiradaha Toronto oo ka soo jeeda bartamaha magaalada (Bay St iyo Queen's Quay) waa safar raaxo leh oo 15-daqiiqo ah, oo leh adeeg xagaaga oo soo noqnoqda iyo aragtida ugu fiican ee cirifka Toronto. (Ka digtoonow: geesaha doomaha doomaha ayaa aad u cod dheer isla markaana dhawaaqi kara wakhti kasta; inta badan way dhawaaqaan markay doontu isu diyaariso inay ka baxdo dekedda.)
Waxa kale oo jira maraakiib shiraac hageysa oo safarro ku tagaya marsooyinka gudaha iyo dibedda, oo dhex wareegaya Jasiiradaha Toronto.
Toronto waa mid aad u weyn, waddooyinka badankooduna waxay maraan masaafo aad u dheer. Jidka tareenka xadiidka, tareenka dhulka hoostiisa mara, iyo adeegyada tareenka isku xidha magaalooyinka waa nadiif waana hufan yihiin, waana suurta gal gebi ahaanba inaad ku soo ag wareegto Toronto baabuur la'aan, gaar ahaan magaalada hoose. Waxaa laga yaabaa inaad ka dhakhso iyo fudeyd u wadid, laakiin waddooyinka waaweyn ayaa si joogto ah u kaydiya inta lagu jiro saacadda degdegga (7 AM-10AM iyo 4 PM-7PM). Toronto waxay leedahay garaashyo badan oo gawaarida la dhigto oo ku yaal bartamaha magaalada, laakiin aad ayey qaali u yihiin.
Qaar badan oo reer Toronto ah waxay ku safraan baaskiil (gaar ahaan bilaha kuleylka) qaabkani waa mid aad ugu habboon in lagu dhex wareego degmada hoose. Dhammaan wadayaasha baabuurtu fursad uma siin doonaan wadayaasha baaskiillada, dhammaan baaskiillayduna uma hoggaansamaan xeerarka waddada; taxaddar ayaa lagu talinayaa.
The Gudiga Socdaalka ee Toronto (TTC) waa nidaamka ugu weyn ee loo maro magaalada waana mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan Waqooyiga Ameerika. TTC waxay ka kooban tahay basaska, jidadka tareennada, khadadka tareennada dhulka hoostiisa mara, iyo khadka tareenka ee loo yaqaan 'Scarborough Rapid Transit'. Lambarada macluumaadka otomatiga ah waa +1 416-393-4636 (INFO) ama + 1-866-642-9882, 8 AM-6PM maalin kasta marka laga reebo ciidaha.
Qiimaha lacagta caadiga ah waa $ 3.25, laakiin tan waxaa laga dhimayaa $ 3.00 haddii aad isticmaasho calaamado ama kaarka Presto. Waayeelka (65 +) iyo ardayda (13-19) waxay xaq u leeyihiin qiimo dhimis qiimo jaban oo ah $ 2.10 (ama 5 tikit oo $ 10.25) wata aqoonsi sax ah. Carruurta (12 iyo ka yar) waxay raacaan lacag la'aan; si kastaba ha noqotee, u diyaargarow inaad muujiso da'da da'da ee carruurta da'doodu u sarreyso.
Kaarka Presto waa nidaam elektiroonig ah oo lagu bixiyo tikidhada dadweynaha ee aagga Greater Toronto, oo ay ku jiraan TTC. Kaararka Presto waxaa laga iibsan karaa $ 6 oo lagu daray $ 10 dheelitirka ugu yar ee miiska adeegga UP Express (Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Pearson), mashiinnada wax lagu iibiyo ee Presto ee dhammaan saldhigyada tareenka dhulka hoostiisa mara ee TTC, ee laga helo tigidhada 'Trans Transit' ee Union Station, xafiiska TTC ee Davisville saldhigga iyo dukaammada ka-qaybgalayaasha Dukaammada Maandooriyaha ee daafaha magaalada. Kaararka Presto waxaa si otomaatig ah loogu qaabeeyaa in laga jaro qiimaha dadka waaweyn. Tanaasulida canugga, waayeelka, dhalinyarada / ardayda iyo ka-dambeynta dugsiga sare waa in kaarka lagu dhejiyaa miiska adeegga 'Express Express', kaarka tikidhada 'Trans Transit', xafiiska madaxa TTC ee saldhigga Davisville ama dukaamada kaqeybgalayaasha 'Shoppers Drug Mart'.
'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'Ka' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'GU' ' Haddii aad u baahan tahay inaad kala wareejiso inta u dhexeysa TTC iyo GO Transit (ama Union Pearson Express) si aad u dhammaystirto safarkaaga, kaarkaaga Presto waxaa loo qaddarin doonaa $ 1.50 dadka waaweyn iyo $ 0.55 ee waayeelka iyo ardayda ka dib dhameystirka wareejinta. Sicir-dhimistaan ​​ayaa sameyneysa ma dalbo haddii kaarka Presto loo diyaariyo kaarka bil kasta ee TTC.
Kaarka TTC ee billaha ah ayaa loo heli karaa dadka haysta kaarka Presto oo keliya. Doorashadan waxay ku kacaysaa $ 146.25 (ama $ 116.75 ardayda / dhalinyarada / waayeelka iyo ardayda dugsiga sare kadib) waxayna siisaa socdaal aan xadidnayn dhamaan adeegyada TTC ee kuyaala Magaalada Toronto marka laga reebo basaska Downtown Express (dariiqa saacadaha degdega ah ee 141-145), dhamaanteed bisha kalandarka.
Kaarka maalinlaha ah ee loo yaqaan 'TTC pass' ayaa qiimihiisu yahay $ 12.50 wuxuuna u oggolaanayaa safarka aan xadidnayn dhammaan adeegyada TTC ee ku dhex yaal Magaalada Toronto, marka laga reebo basaska Downtown Express. Sabtiyada, Axadaha iyo maalmaha fasaxyada qaarkood ilaa 6 qof (1 qaangaar ah + 5 dhalinyaro ah ama 2 qaangaar ah + 4 dhalinyaro ah) ayaa ku safri kara hal maalin oo pass ah. Kaararka maalintu way fiican yihiin illaa 5:30 AM subaxda dambe. Baasaboorka maalinta looma baahna in la iibsado maalinta la isticmaalayo.
Kaarka TTC ee toddobaadlaha ah wuxuu ku kacayaa $ 43.75 ($ 34.75 waayeelka ama ardayda) wuxuuna u oggolaanayaa safarka aan xadidneyn laga bilaabo Isniinta illaa Axadda toddobaad la siiyay. Baasaboorka toddobaadlaha ah waxaa isticmaali kara in ka badan hal qof laakiin hal qof oo keliya ayaa laga yaabaa inuu la safro baasaboorka waqti kasta oo la siiyo.
Tigidhada, astaamaha, maalinta iyo kaararka toddobaadlaha ah ayaa laga heli karaa saldhigyada dhulka hoostiisa mara oo leh waabab-qaadayaal, dukaamo kala duwan iyo wargeysyada magaalada oo dhan jooga. Inta badan ganacsiyada iibiya kaararka iyo astaamaha calaamadda TTC waxay ku dhegan yihiin albaabkooda hore. Saldhigyada dhulka hoostiisa mara ee leh waababka wax lagu ururiyo ayaa aqbali doona kaararka debit iyo amaahda (Visa, Mastercard, ama American Express) iibsashada $ 10 ama in ka badan oo ah qiimayaasha. (Saldhigyada dhulka hoostiisa mara ee laga soo qaado Lawrence West ilaa Vaughan Metropolitan Center saldhigyada ku yaal gacanta galbeed ee Line 1 Yonge – University ma laha waabab ay ku urursadaan.)
Qiimaha GTA Zone: Dhowr wado oo basaska TTC ah ayaa u gudba dhanka Mississauga ama Gobolka York. Kuwaas awgeed, waa inaad bixisaa khidmadda TTC (lacag caddaan ah, tigidh, calaamado ama Presto) oo ku taal Toronto oo lagu daray khidmadda Mississauga ama Gobolka York ee ka baxsan Toronto. Baabuurtu uma isticmaali karaan Presto inay ku bixiyaan qiimaha labaad ee ka baxsan Toronto; waa in lagu bixiyaa lacag caddaan ah ama calaamadda TTC iyo lacag yar oo kaabis sax ah. Ka eeg xiriirka wixii faahfaahin dheeraad ah.
Wadooyinka laga galo tareenka tareenka ee TTC-ka ee aan la fasaxin ayaa u oggolaanaya kaliya dadka haysta kaarka Presto inay ka gudbaan irdaha lagu raaco. Dhammaan noocyada kale ee lacag-bixinta (sida lacagta, astaamaha, tikidhada, wareejinta waraaqaha, iyo kaararka TTC ee jirka, oo ay ku jiraan maalin, toddobaadle iyo muuqaal GTA toddobaadle ah) waxaa lagu aqbalaa oo keliya marinnada laga galo tareenka dhulka hoostiisa mara halkaasoo uu joogo qof ka tirsan saldhigga tareenka ee TTC.
Baabuur TTC ka weyn
Haddii aad ku bixineyso lacagtaada lacag, tigidh ama calaamo, xusuusnow inaad hesho warqad wareejin ah marka aad bixinaysid lacagtaada taas oo cadeyn u ah lacag bixinta markaad u kala wareegeysid gawaarida ama / ama tareenka dhulka hoostiisa mara iyo kan kale iyo sidoo kale inaad tusto kormeerayaasha qiimaha inta ay saaran yihiin gawaarida. Wareejinta waraaqaha waa bilaash waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku dhammaystirto safar hal-dhinac ah oo ku socda waddooyin badan oo TTC ah adoo adeegsanaya hal tikid. Saldhigyada tareenada dhulka hoostiisa mara, waxaad ka wareejin kartaa wareejintaada mashiin cas oo ka baxsan meesha tigidhada iyadoo wejigeeda ay ku jirto saacad dijitaal ah. Basaska ama dariiqyada waaweyn ee dariiqyada (sawirka sare), weydiiso wareejin darawalka markaad bixinaysid qiimahaaga. Gawaarida cusub ee jidadka (sawirka hoose), mashiinka lacag bixinta ee saaran baska ayaa ku siin doona risiidh / wareejin haddii aad ku bixiso lacag qadaadiic ah ama calaamo ahaan; haddii aad tikid ku bixiso, isticmaal TTC Tigidarka ansaxiyaha in waqti lagu dhufto tigidhka oo loo beddelo wareejin. Meelaha qaar ee lagu raaco basaska waxay leeyihiin mashiin lacag bixin oo la mid ah kuwa laga heli karo gawaarida cusub.
Haddii aad ku bixiso lacag caddaan ah, tigidh ama calaamado, wareejinta warqadda ku saleysan ee aad ku hesho lacag bixinta waxay shaqeyneysaa oo keliya hal safar halkii ay ka ahaan laheyd waqti cayiman. Looma isticmaali karo safar joogsi ama safarro wareeg ah. Inaad ka fogaato barta bedelka halkii aad ka sugi lahayd bas ama baska wadada waxay burin doontaa wareejintaada isticmaalka dheeraadka ah maadaama socodkaaga loo tixgelin doono inuu yahay joogsi-dhaaf.
Haddii aad ku bixinaysid Presto adoo adeegsanaya lacag kaarka baaqiiga ah ee lagu kaydiyay, wareejinta waxay shaqeyneysaa laba saacadood laga bilaabo tuubada ugu horeysa, taas oo kuu ogolaaneysa inaad sameyso joogsi aan xadidneyn ama safar wareeg ah. Isticmaalayaasha Presto waa inay garaacaan kaarkooda markasta oo ay bas raacayaan ama baska marayaan iyo markay galayaan saldhigga tareenka dhulka hoostiisa mara, illaa iyo inta ay ku jiraan laba saac gudahood laga bilaabo qasabadda ugu horreysa, wax lacag ah lagama qaadi doono.
Fiiro gaar ah: qaybaha nidaamka dhulka hoostiisa mara waxay xirmi doonaan inta badan dhamaadka usbuuca dayactirka iyo mashaariicda dhismaha, basaska ayaa badalaya qeyb kasta oo xiran. Sidaa darteed, filo waqti safar oo dheeri ah inta lagu jiro xirnaanshaha noocaas ah; shaqaalaha ayaa la socon doona si ay rakaabka u toosiyaan. Inta badan xirnaanshaha usbuuca dhammaadku waxay saameyn ku yeelan doonaan Khadka 1 Yonge-Jaamacadda.
Khariidada Transit Transit ee Toronto
Tareenka dhulka hoostiisa mara waa wadada ugu dhaqsaha badan ee magaalada looga gudbo, tareenadu sida caadiga ah waxay yimaadaan daqiiqad kasta. Tareenadu waxay shaqeeyaan M-Sa qiyaastii 6 AM-1: 30AM, iyo Su 8 AM-1: 30AM; websaydhka TTC wuxuu ku siinayaa waqtiyada tareenka ee ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya saldhig tareenka dhulka hoostiisa mara.
Nidaamka tareenka dhulka hoostiisa mara wuxuu leeyahay afar xariiq:
Line Yonge-University wuxuu ku socdaa qaab 'U', wuxuu ka socdaalaa Waqooyiga York dhanka koonfureed wadada Yonge Street, wuxuu marayaa bartamaha magaalada ilaa Saldhigga Union, ka dibna wuxuu u socdaalayaa waqooyiga ilaa North York ilaa Vaughan.
Line Bloor-Danforth wuxuu mara bariga-galbeed wadada Bloor Street iyo Danforth Avenue.
Line Scarborough waxay ka socotaa dhammaadka bari ee Khadka 2 ee Saldhigga Kennedy ilaa Saldhigga McCowan. Saldhigga Xarunta Scarborough, waxaa ku yaal Xarunta weyn ee dukaamaysiga iyo xarunta gaadiidka gobolka ee TTC, GO Transit, iyo tababarayaasha xaafadaha ee u sii jeeda bariga xagga Ottawa, Montreal iyo meelaha kale.
Line Sheppard wuxuu ka socdaa bariga Line 1 wadada Sheppard Avenue ilaa Fairview Mall ee ku yaal Don Mills Station.
Toronto waa mid ka mid ah magaalooyinka fara ku tiriska ah ee Waqooyiga Ameerika (iyo magaalada kaliya ee ku taal Kanada) ee haysay mid kasta oo ka mid ah jidadkeeda, iyo TTC-ga ayaa ballaarinaya isku-xidhka. Eeg qodobbada degmada si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ku-socodka baska. Inta badan khadadka basaska waxay u adeegaan koonfurta, bartamaha magaalada.
Wadada boqorada ee 501 waa soojiidasho lafteeda iyada oo maraysa xaafado badan oo qowmiyadeed iyo dhaqameed. Waxay ka heshay aqoonsi gaar ah National Geographic joornaalka oo ah marinka ugu dheer ee basaska ee Waqooyiga Ameerika (iyo mid ka mid ah adduunka ugu dheer).
Mashiinnada lacag-bixinta ayaa laga heli karaa sabuuradda cusub iyo marinka ugu istaagga 509 Harbourfront iyo 510 Spadina. Mashiinnada mashiinka waxay kuu oggolaanayaan inaad ku bixiso qiimahaaga qadaadiic, calaamadda ama tigidhka ka hor intaadan fuulin baska. Haddii aad haysato wareejin ama kaarka Presto, waxaad ka geli kartaa baska albaab kasta; haddii kale, kaarro duug ah ka gal albaabka hore iyo gaari cusub oo albaabka labaad ama saddexaad ka soo gala si aad u bixiso qiimahaaga oo aad ku hesho wareejin.
Digniin: markaad fuuleyso iyo marka aad ka baxeysid bajaajleyda, hubi in baabuurta la joojiyo haadka ku xiga baska. Sidoo kale, ka feejignaada jeebabka xaaladaha degdega ah ee saacadaha badan.
Wadooyinka qaar ee basaska waxaa lagu badalay basas mustaqbalka dhaw, albaabada oo dhan laga soo galo / laga baxo iyo sharciyada cadeynta bixinta lacag bixinta ayaa wali ka socota wadooyinkan inkastoo.
Isku xirka adeegyada gaadiidka dadweynaha
Dhowr xarumood oo tareenka dhulka hoostiisa mara ah oo loo yaqaan 'TTC' waxay u shaqeeyaan marinno loo maro nidaamyada kale ee gaadiidka dadweynaha ee deegaanka. Waxaad ubaahantahay inaad bixiso qiimo gooni ah oo ah nidaam kasta oo hoos kuqoran maadaama aysan aqbalin wareejinta TTC. Dhammaantood waxay aqbalaan kaarka Presto ee bixinta khidmadda. Saldhigyada waaweyn ee tareennada dhulka hoostiisa mara ee u kala gudbinta TTC iyo nidaamka gaadiidka dadweynaha ee maxalliga ah waa:
Saldhiga Finch: Basaska YRT iyo Viva ee taga Gobolka York
Saldhigga Tuulada Pioneer: Basaska YRT ee Vaughan
Saldhiga Islington: Basaska MiWay ee taga Mississauga
Xarunta Vaughan Metropolitain: YRT iyo Viva basaska ku sugan Vaughan, basaska Züm ee taga Brampton
Tagaasida waa badan yihiin waana aamin, laakiin ma ahan kuwo jaban. Heerka salka waa $ 4.25, celcelis ahaan safarka 5 km wuxuu ku kacayaa $ 13. Sida magaalooyinka waaweyn badankood, wadista baabuurka magaalada hoose waxay noqon kartaa mid dhib leh; Baarkinka baabuurta dhigashadu badanaa way adag tahay in la helo waana qaali, taraafikada waddooyinka qaarkoodna waxay ka dhigi karaan safarka gaariga mid ka gaabiyo gaadiidka dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, safridda masaafada dheer, marka aan u dhoweyn khadadka dhulka hoostiisa mara badanaa si dhakhso leh ayey uga dheereeyaan baabuur ama taksi.
Adeegga UberX ee UberX waxaa laga heli karaa barnaamijka taleefannada casriga ee magaalada oo dhan iyadoo qiimaha lagu raaco qiyaas ahaan kala bar qiimaha taksiga. Celcelis ahaan safar 5-km ah ayaa ku kacaya qiyaastii $ 8.25.
Baaskiil Wadaag Toronto meel ku dhow hoolka magaalada Toronto.
Toronto waxay isku dayeysaa si aad u adag inay noqoto magaalo baaskiil saaxiibtinimo leh, oo hareeraha hareeraha mootooyinka lagu daro markasta. Waxaa jira baaskiillo badan oo caadi ah oo banaanka ka baxa markasta. Waana dhakhso: albaab ilaa albaab, dhammaan magaalada Toronto dhexdeeda, baaskiil ayaa garaaca baabuur ama ku sii dhowaad markasta.
Waxaa jiri kara cadaawad u dhaxeysa gawaarida iyo baaskiil wadayaasha. Guud ahaan, hadaad ku socoto wadada, waxaa lagaa filayaa inaad uhogaansato isla sharciyada baabuurta, loomana ogola inaad raacdo wadada.
Magaaladu badanaa waa fidsan tahay, marka laga reebo fuulitaanka guud ee ka durugsan harada Ontario iyo qulqulka qoto dheer, Kaymaha Don Valley iyo Dooxada Humber. Fariimaha qufulka-iyo-ring-ka ayaa ku yaal magaalada oo dhan. Waxaa jira wadooyin badan oo baaskiil keliya lagu maro waddooyinka waaweyn oo dhexmara xaafado iyo jardiinooyin kala duwan. Magaaladu waxay daabacdaa khariidad baaskiil wadid, oo laga heli karo websaydhka magaalada.
Baaskiil Wadaag Toronto wuxuu bixiyaa nidaam baaskiil dadweyne oo wata 1,000 baaskiil oo laga heli karo 80 saldhig oo magaalada oo dhan ah. Diiwaangelintu waxay ka bilaabaneysaa $ 5 muddo 24 saacadood ah waxayna kuu oggolaaneysaa inaad baaskiil u isticmaasho 30 daqiiqo ama ka yar, inta aad jeceshahay (khidmadaha adeegsiga ayaa lagu dalbanayaa safarada ka badan 30 daqiiqo). Waxay shaqeysaa 24 saacadood maalintii, sanadka oo dhan (laakiin fiiri digniinta hoose ee ku saabsan baaskiil wadista jiilaalka). Ganacsiyo dhowr ah ayaa sidoo kale bixiya kireynta baaskiillada.
Waa sharci goboleed in baaskiilleyda ka yar 18 sano waa inay xirtaan koofiyad, oo dhammaan wadayaasha waa inay lahaadaan baaskiil leh iftiin iyo gambaleel. Tani waxay u egtahay in la dhaqan galiyo oo keliya marka booliisku ay aadaan sanadle ah "baaskiil wadista".
Ka taxaddar baabuurta la dhigto - inta badan shilalka kuma dhacaan baabuurta dhaqaajisa, laakiin waxaa iska leh darawalo taxaddar la'aan ama rakaab si lama filaan ah u fura albaabka darawalkooda.
Ka taxaddar waddooyinka tareenka maaddaama shaagagga baaskiilku si fudud loo qaban karo oo ay u daadan karaan.
In kasta oo hubaal aad arki doontid dad badan oo deegaanka ah oo waddooyinka maraya sannadka oo dhan, baaskiil wadista bilaha jiilaalka waxaa lagu raaxaysan karaa oo keliya qalab habboon iyo xirfado macquul ah; cimilada qaboobaha waa qabow, waxay noqon kartaa dabayl xad dhaaf ah, barafka ka saaridiisuna badanaa waa bilaa dhammaystir.
Qaar ka mid ah jidadka baaskiil lagu taliyo:
Ilaa hadda mid ka mid ah wadiiqooyinka ugu caansan ee loo maro baaskiillada waa Martin Goodman Trail, oo ah wadada bari-galbeed ee isku xirta harada Ontario, oo ku baahsan magaalada laga bilaabo Etobicoke illaa iyo dhinacyada bari ee magaalada. Jidkan sidoo kale badanaa waxaa adeegsada dadka lugaynaya iyo kuwa rogaya.
Nidaamka raad-raaca Don River wuxuu ka bilaabmaa harada (oo u dhow Queen iyo Broadview) wuxuuna u safraa meel aad uga fog woqooyi iyo bari. Inta lagu jiro ama ka dib roobabka culus, ka fogow qaybaha hoose ee raadadka.
Daawayn gaar ah oo loogu talagalay rookayaasha heerarka oo dhan ayaa ah booqasho loo maro Tommy Thompson Park (Leslie St Spit) ilaa laydhka iyo meelaha quduuska ah ee shimbiraha (baabuur la'aan!), Oo furan maalmaha fasaxa oo keliya. Ka bilow boqoradda iyo Leslie oo aad dhanka koonfureed.
Booqashada Jasiiradaha Toronto oo ka timaadda doomaha ku yaal dhammaadka koonfureed ee Bay Street waa hab fiican oo lagu qaato baaskiil saaxiibtinimo, galab nasasho leh oo baaskiil wata. Ma jiraan gawaari gaar loo leeyahay jasiiradaha Toronto.
Hoolka Magaalada Toronto ee habeenkii
Farshaxanka Fanka ee Ontario. Carwada farshaxanka ee ugu weyn Kanada, waxaa dib u naqshadeeyay naqshadeeye Frank Gehry. Waxay ku leedahay sawir gacmeedyo waaweyn oo Canadian ah iyo ururinta ugu weyn adduunka ee sawir gacmeedyada Henry Moore. Sawirada yurubiyanka waxay soo bandhigaan dhawr qaybood oo aad u fiican oo ay ku jiraan kuwa Ruben Xasuuqii dadka aan waxba galabsan.
Matxafka Kabaha Bata. Matxafkan qurxinta badan ayaa loogu talagalay kabaha iyo kabaha dhaqamada adduunka oo idil.
Black Creek Village Pioneer Village waa madadaalo nololeed qarnigii 19-naad Ontaariyo waxayna ka kooban tahay in ka badan afartan dhismayaal taariikhi ah qarnigii 19-aad, oo lagu qurxiyay qaabkii 1860-meeyadii oo ay ku jiraan qalab xilliyeed iyo jilayaal matalaya tuulooyinka.
Casa Loma waa tallaabo dib loogu soo celiyey xilligii xarrago iyo bilic reer Yurub ah. Madxafka waxaa lagu qurxiyay qolal, marinno sir ah, tunel dheer oo dhererkiisu yahay 250 mitir, munaarado, xeryo iyo jardiinooyin qurux badan oo 5 hektar ah.
Matxafka Gardiner ee Farshaxanka Farshaxanka. U heellan dhoobada dhoobada dhismaha casriga ah.
Hoolka Xeegada ee Caanka ah waa labadaba madxaf iyo hool caan ah oo loogu talagalay taariikhda xeegada barafka.
Xarunta Sayniska Ontario. Matxafkan saaxiibtinimada leh ee carruurta ayaa leh dhowr boqol oo bandhig, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa gacanta ku haya.
Madxafka Royal Ontario waa matxaf faneed, dhaqan adduun iyo taariikh dabiici ah. Waa mid ka mid ah matxafyada ugu waaweyn Waqooyiga Ameerika, iyo kan ugu weyn Kanada.
Matxafka Guriga 'Spadina House' wuxuu ku jiraa guri taariikhi ah oo laga soo bilaabo 1860-meeyadii. Barxadaha waxaa ku jira beer qurux badan.
Madxafka Dharka ee Kanada. Bandhigyada laga soo qaatay 13,000-xabbadood oo dhar ah oo ka kala yimid adduunka oo dhan iyo ururo kale.
CN Tower. Dhererka 533 mitir, CN Tower waa dhismaha seddexaad ee ugu sarreeya adduunka oo xor ah, iyo kan ugu dheer Waqooyiga Ameerika.
Xarunta Rogers waa garoon weyn oo ujeedooyin badan leh oo leh saqaf dib looga noqon karo. Waxay hoy u tahay Toronto Blue Jays of Major League Baseball.
Aqalka Magaalada Toronto. Laba dhisme oo sameysmaya wareeg-wareega oo fiirinaya Fagaaraha Nathan Phillips. Naqshad ahaan qaab dhismeed qurux badan leh, albaabna u xiga Hoolka Magaalada (hadda waa guri maxkamadeed) kaas oo leh qaab dhismeed casri ah.
Beerta Xayawaanka Toronto waa xayawaankii ugu horreeyay ee reer Kanada oo soo bandhigaya in ka badan 5,000 oo xayawaan ah iyo 460 nooc.
Toronto waa "magaalada ku dhex taal baarkinka", oo leh maylal iyo maylal dhul-beereed iyada oo raacaysa durdurrada iyo webiyada ku qulqula magaalada. Edwards Gardens iyo Jardiinooyinka dhirta Toronto xaafadda North York waxaa laga yaabaa inay tahay meesha laga bilaabo sahaminta deegaankan dabiiciga ah.
Magaalada Toronto waxay u qoondeysay noocyo kala duwan Socodka Socodka taasoo muujineysa taariikhda dabiiciga ah iyo tan aadanaha ee gobolka. Kuwani waxaa laga heli karaa calaamado wareegsan oo bunni ah oo waddada maraya waxayna muujinayaan gobollada kale sida Khadka Belt, Garrison Creek iyo Webiga Humber iyo sidoo kale bartamaha magaalada.
xeebaha ku. Toronto waxay leedahay saddex qaybood oo waaweyn oo xeebta ku teedsan harada Lake Ontario. Kuwa ugu caansan kuwan waxay ku yaalliin xaafadda Xeebta ku habboon ee loo yaqaan. Beddelka ugu caansan waa xeebta ku taal dhammaadka galbeed ee magaalada ee xaafadda Parkdale; kani wuxuu mar ahaan jiray Jasiiradda Coney ee Toronto, oo leh beero madadaalo iyo soo jiidasho fara badan oo u eg xeebta; si kastaba ha noqotee 1950s magaaladu waxay dhistay Wadada Gardiner Expressway ee hareeraha harada, iyadoo si wax ku ool ah u kala soocday xeebta iyo magaalada ayna sababtay in la dumiyo beerta madadaalada; sanadihii la soo dhaafay waxaa la isku dayay in dib loo xoojiyo aaggan, laakiin Gardiner ayaa weli ah caqabad weyn, iyo sidoo kale isha ilaha iyo wasaqowga si looga fogaado inay noqdaan dadka xeebta taga. Dhanka dheeriga ah, xeebaha badanaa wey madhan yihiin inta badan, iyagoo kalinimo siiya kuwa doonaya. Aagga saddexaad ee xeebta weyn ee magaalada wuxuu maraa xeebta koonfureed ee Jasiiradaha Toronto. Aaggan waa mid si farxad leh ku xiran, iyadoo jasiiradaha badankood lagu daboolay dhul-beereed iyo baarkin yar oo madadaalo ah. Hanlan's Point Beach oo ku taal xeebta galbeed ee jasiiradaha ayaa ah magaalada kaliya ee magaalada Toronto si rasmi ah loogu aqoonsan yahay dhar ikhtiyaar ikhtiyaar ah, iyo madadaalo caan ah. In kasta oo ay jiraan xulashooyinkan, qaar badan oo reer Toortooniyaan ah ayaa doorbidaya inay magaalada uga baxaan safarada xeebta; xeebaha ugu caansan waa kuwa ku yaal aagga Georgia ee waqooyiga Toronto, Xeebta Wasaga gaar ahaan waa mid aad loo jecel yahay xilliga xagaaga.
Farshaxanka & madadaalada
comedy. Tiyaatarka majaajillada / improv ee Magaalada Labaad ee adduunka oo dhan caan ka ah wuxuu ku yaal meel magaalada Toronto ah. Fiiri horumarin weyn iyo majaajillo majaajilo ah oo si toos ah loogu sameeyay daawadayaal kaqeybgalaya casho iyo cabitaanno kujira bartamaha degmada naadiga magaalada hoose ee Toronto.
Theatre. Toronto waxay leedahay goob tiyaatar ah oo aad ufiican dhadhan iyo miisaaniyad kasta. Ka eeg tiyaatarada waa weyn ee ku yaal wadada loo yaqaan 'Yonge Street' wixii ku saabsan bandhigyada buufinta weyn. Masraxyada yaryar ee lifaaqa iyo meelaha kaleba waxay bixiyaan wax soo saar yar yar oo ka bilaabma shaqooyinka asalka ah ee Kanada, avant-garde, tiyaatar tijaabo ah, muusikada miisaaniyada yar ilaa qarsoodiga dilka Ingiriiska. Dabaaldegyo kala duwan oo xafladaha tiyaatarka ah sida Fikradaha Cusub, Rhubarb iyo Fringe xafladaha ayaa ah abuur guulo ganacsi oo badan sida Chaperone Doomaha. Sidoo kale isku day inaad iska hubiso Xarunta afarta xilli ee Farshaxanka, guriga cusub ee Canadian Opera Company iyo Ballet National of Canada. Symphony-ka Toronto wuxuu ku ciyaaraa hoolka si qurux badan loo cusboonaysiiyay ee Roy Thomson Hall. TO Tix Yonge-Dundas Square waa meesha ugu fiican ee laga helo hormaris qiimo buuxa leh iyo maalin-dhimis lagu sameeyo bandhigyada guud ahaan Toronto. Waxay sidoo kale bixisaa baakadyo iyo baakado cunno, iyadoo lala kaashanayo tiyaatarka Toronto, qoob ka ciyaarka iyo shirkadaha opera oo leh maqaaxiyo ku yaal magaalada hoose iyo soo jiidasho dhaqameed.
Dhacdooyinka sanadlaha ah
Bandhigga Qaranka Kanada (Ex, CNE), Meesha Bandhigga. Laga soo bilaabo bartamihii Ogosto ilaa Maalinta Shaqaalaha. Ex waa carwad sanadle ah oo bixisa jardiinada madadaalada (Midway), casino, madadaalo toos ah, suuq caalami ah, bandhigyo beeraha oo ay ku jiraan xoolaha iyo waxyaabo kale oo kala duwan. Waa carwada ugu weyn Kanada iyo tan shanaad ee ugu weyn Waqooyiga Ameerika, iyadoo celcelis ahaan sanadkiiba ay soo xaadiraan 1.3 milyan. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Albaabada Furan. Dhacdadan, oo la qabtay dhammaadkii usbuucii ugu dambeeyay ee Maajo, waxay siisaa dadka deggan iyo martida fursad ay ku indho-indheeyaan albaabbada in ka badan 100 dhismayaal dhisme ahaan, taariikh ahaan, dhaqan ahaan iyo bulsho ahaanba magaalada oo dhan. Qaar badan oo ka mid ah dhismayaashaan caadi ahaan uma furan dadweynaha. Tiro ka mid ah matxafyada magaalada ayaa bixiya gelitaan bilaash ah dhamaadka usbuuca. Galitaan bilaash ah (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Kibirka Toronto. Waxaa la qabtay usbuucii ugu dambeeyay ee Juun. Pride Toronto waa xaflad sanadle ah oo loo yaqaan 'Gay festival' oo ay ka mid tahay Pride Parade aad loo jecel yahay taas oo soo jiidanaysa dad badan oo toosan si loo ogaado sida dadka Gay ay u baashaalaan. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Bandhigga Filimka Madow ee Toronto (TBFF). La qabtay bishii Febraayo. TBFF waxay soo bandhigaysaa filimada madow ee xusida mudan waxayna bixisaa gole looga doodayo arrimaha waaweyn ee dhaqanka, bulshada iyo dhaqan-dhaqaale. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Bandhig Faneedka Toronto International (TIFF). Wuxuu bilaabmaa habeenka Khamiista kadib Maalinta Shaqaalaha. Bandhiggan fagaaraha ah ee filim caalami ah ayaa ka dhacaya tiyaataro kala duwan waxaana jiidaya dad badan oo caan ah iyo kuwa caan ah. (la cusbooneysiiyay Jan 2016)
Wadooyinka dadka lugaynaya ee magaalada Koreatown.
Toronto waxay leedahay xaafado badan oo laydh ah in socod aan kala sooc lahayn ay ku xiiso galiso iskood. Waxaa laga yaabaa inaad ka bilowdo aagga Downtown ka dibna aad isku daydo xaafado kale oo ku hareeraysan magaalada. Waa kuwan talooyin kooban oo xaafadaha ah oo la booqanayo. Faahfaahin dheeri ah iyo tusaalooyin badan ayaa laga helayaa qodobbada degmada.
Degmada Distillery. Dhulkii hore ee kala wareejinta Gooderham & Worts ayaa dib loogu cusbooneysiiyay tuulo dadka lugeynaya oo kaliya loogu talagalay farshaxanka iyo madadaalada. Waxay leedahay makhaayado fantastik ah, ciidaha, iyo qolalka farshaxanka oo ku yaal dhismayaasheeda qarnigii 19-aad.
Harbourfront, Dekedii hore ee warshadaha ee Toronto, maanta waa dhulbeereed badan oo leh baaskiil wadooyin iyo socod iyo aragti wanaagsan oo ku saabsan dekedda. Xarunta Harbourfront waxay ku taal dhinaca midigta hareeraheeda, waxayna hoy u tahay dhacdooyin dhaqameed badan oo badankood bilaash yihiin ama aan qaali ahayn. Qaado qaar ka mid ah adduunyada wax soosaarka farshaxanka ee aadka loo amaanay, ama ku raaxayso mid ka mid ah ciidaha adduunka badankood ee dhaca usbuuc kasta.
Jasiiradaha Toronto. Doon yar oo raqiis ah oo ka raaca lugta Bay Street oo aad ka tagto buuqa magaalada gadaal. Muuqaal ahaan, aragtiyada cirka ee jasiiradaha waa kuwo cajiib ah, oo baaskiil wadista, socodka, jimicsiga ama nasashada kaliya, Jasiiradaha Toronto way adagtahay in laga adkaado. Xitaa waxaa jira baarkin yar oo madadaalo oo loogu talagalay carruurta, Centerville. Maalmaha xagaaga kulul, heerkulka halkan badanaa wuxuu ka yaraan doonaa 2-3C marka loo eego dhul-weynaha bixinta gargaarka. Markay tahay badhtamaha xagaaga biyuhu way diirran yihiin oo waxay ku dabaalanayaan Barta Hanlan ama kuwa xiisaha badan leh, xeeb qaawan ayaa ku taal meel u dhow.
Talyaaniga yar waa barta lagu helo dareenka Galbeedka Badda Dhexe. Fariiso mid ka mid ah meheradaha qaxwada badan oo daawada adduunyada oo maraysa dhamaadka usbuuca. Waqti aad u wanaagsan oo la booqdo waa inta lagu guda jiro tartanka FIFA World Cup ragga (kubbadda cagta / kubbadda cagta), iyada oo aan loo eegin halka adduunka laga qabanayo dhab ahaan iyada oo bulshada maxalliga ah ay is wajahayaan tartankuna uu gaarayo heer qandho. Taageeradu waxay noqon kartaa mid xamaasad leh iyo xitaa bulshooyinka deriska ah mana aha wax aan caadi ahayn inaad aragto iyaga oo lagu duubay calamado kala duwan oo maskaxda ka daalaya afartii sanoba mar.
Magaalada Chinatown ee magaalada Toronto waa hab fiican oo lagu tijaabiyo xoogaa yar oo magaalooyin ah sida Hong Kong, iyadoon kharashka diyaaradda la bixin. Dad aad u tiro badan ayaa burburiyey waddooyinka iyadoo iibiyeyaashu ay iibinayaan cunnooyinka Shiinaha iyo Fiyatnaamiis oo sax ah, oo aan sidaas ahayn-garaacid dhab ah. Tani waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Waqooyiga Ameerika, oo leh dukaamo badan oo loogu talagalay dalxiisayaasha, waa meel wanaagsan oo laga soo qaadan karo waxyaabo xusuus aan caadi ahayn oo qaali ah. Aagga sidoo kale waxaa ku yaal tiro sii kordheysa oo dukaanno iyo maqaayado Kuuriya iyo Fiitnaam ah. Muusigga dhaqamada kala duwan ee Toronto waligiis ma joojinayo inuu isbeddelo. Booqasho dhammeystiran, waxaad ugu safri kartaa Spadina (waqooyi / koonfur) adigoo ka bilaabaya Kulliyadda Waddada waqooyiga ama Queen Street ee koonfurta.
Suuqa Kensington waxay mar ahaan jirtay Xarunta Nolosha Yuhuudda oo ku soo dhacday Xarunta muuqaalka bohemian ee Toronto. Soo -booqdayaasha waxaa lagu weerari doonaa dhawaaqyo iyo ur ka duwan meel kasta oo magaalada ka mid ah, maadaama waddooyinka cidhiidhiga ah ay ku qulqulayaan soo -galootiga, feeraha, iyo yuppies -ka. Dukaamada waxaa ka mid ah dukaamada dheeraadka ah, guryaha qaxwada, maqaayado yaryar (oo ay ku jiraan khudaar), iibiyeyaasha dharka, iyo dukaamada wax lagu qoro. Suuqyada kalluunka iyo miraha ayaa iyaguna aad u badan, waxaana aagga laga dareemayaa kor u kaca meheradaha cuntada ee Koonfurta Ameerika goor dambe.
Koreatown wuxuu leeyahay meherado badan oo tafaariiqda Kuuriya ah iyo maqaayado ay Kuuriya caan ku tahay sida Ingiriisiga calaamadaha. (Waxa kale oo jira Koreatown kale oo ku taal Waqooyiga York.
Gerrard India Bazaar (Hindiya yar) Haddii aad rabto inaad hesho dareen ku saabsan bulshada firfircoon ee Koonfurta Aasiya ee Toronto, waa halka aad rabto inaad joogto; kaliya maahan dhaqanka Hindida in la matalo - bulshooyinka Pakistaan ​​iyo Afqaanistaan ​​ee muuqda ayaa sidoo kale ku nool wadada.
The 501 Basaska wadada boqoradda ayaa lagu aqoonsaday National Geographic joornaalka oo ah marinka gawaarida ugu dheer Waqooyiga Ameerika (mid ka mid ah adduunka ugu dheer). Safarka laga bilaabo gees ilaa gees wuxuu qaadanayaa dhowr saacadood wuxuuna marayaa xaafado badan oo qowmiyadeed iyo dhaqameed.
Toronto waxay leedahay fursado ku filan oo wax looga iibsado, ku dhowaad qayb kasta oo magaalada ka mid ahina waxay leedahay meelo u gaar ah oo laga adeegto:
Aragtida gudaha ee Xarunta Eaton ee Toronto.
Xarunta Toronto Eaton. Fagaaraha Yonge-Dundas. In ka badan 285 dukaanno iyo adeegyo, oo ay ku jiraan inta badan noocyada ugu caansan Waqooyiga Ameerika, iyo laba maxkamadood oo cunto oo loogu talagalay dhadhan kasta.
Nidaamka 'PATH'. Isku xirka 1,200 dukaamo iyo 50 dhisme, PATH waa suuq laga dukaamaysto oo dhulka hoostiisa ah ayaa loo sameeyay dhamaan rakaabka inay ka soo galaan Union Station xafiisyadooda dibna ugu laabtaan iyagoo aan waligood dibedda u bixin. Magaalada kuleylka xagaaga ee Toronto iyo qabowga xilliga qaboobaha, tani waa lagama maarmaan.
Mink Mile. Haddii aad galbeed uga dhaqaaqdo geeska Yonge iyo Bloor, waxaad ku jirtaa heerka ugu sarreeya ee degmooyinka wax laga iibsado ee Toronto, oo si fudud looga heli karo saldhigga tareenka ee Bloor-Yonge ama Bay. Wadada Bloor ee udhaxeysa Yonge iyo Avenue waxaa loo arkaa inay tahay nooca Toronto ee Fifth Avenue, oo leh magacyo sare sida Hermes iyo Louis Vuitton, iyo dukaanka weyn ee caanka ah Holt Renfrew.
Yorkville. Degmadan wax iibsiga ee dhamaadka-sare ee woqooyi ka xigta Bloor Street iyo galbeedka Bay Street waxay hoy u tahay dukaamo badan oo naqshadeeyayaal ah. Waxay kaloo leedahay qolal badan oo farshaxanka lagu iibiyo.
Suuqa Kensington waxay bixisaa waayo-aragnimo dukaameysi oo Bohemian ah gaar ahaan dhammaadka koonfureed ee Wadada Kensington. Halka guryaha dahaarka ku leh labada dhinac ee wadada loo rogay dukaamo ay ku jiraan dharka lagu soo bandhigo barxadda hore.
Waxaa ku yaal degmooyin badan, xaafadaha laga dukaameysto ee ku yaal gudaha magaalada. Kuwani waxay inta badan ku yaalliin waddooyinka waaweeyn ee hal dhinac ama labada dhinacba leh dukaamo ku yaal dhismayaasha dhaadheer. Tusaalooyin yar ayaa ah Queen Street West (gaar ahaan bariga wadada loo yaqaan 'Spadina Avenue' una sii gudubta dhanka galbeed illaa West End), Uptown Yonge waqooyiga Eglinton Avenue ee wadada Yonge, iyo Tuulada Roncesvalles. Waxaa jira aagag badan oo badan oo leh dariiqyo bakhaarro leh oo kuyaala gudaha magaalada laakiin waxay ku yaryihiin xaafadaha hareeraha magaalada sida Etobicoke, North York iyo Scarborough oo iyagu doorbida suuqyada waaweyn. La tasho qodobbada degmada.
Xarunta Ganacsiga ee Yorkdale. Xarunta dukaamaysiga ee waqooyiga magaalada, oo laga heli karo saldhigga tareenka ee Yorkdale. Kani waa adeeg buuxa, suuq sare oo leh boqollaal bakhaar, laakiin sidoo kale waxaa ku badan baakadaha dhallinta rogaalka ah ee u adeegsada tas-hiilaad ahaan goob bulsho. Isticmaal tareenka dhulka hoostiisa mara haddii ay suurogal tahay dhammaadka wiigga, maadaama dadka deegaanku ay xirxiraan meelaha baabuurta la dhigto si ay u awoodaan.
Lacagta oo la beddelo bangi la aqoonsan yahay ama hay'ad maaliyadeed ayaa ugu fiican; waxaa jira wax yar oo ku takhasusay isbedelka xafiiska degmada maaliyadeed ee magaalada Toronto iyo gobolka Mississauga ee garoonka diyaaradaha. Hoteellada qaar, dukaamada xusuusta iyo xafiisyada dalxiisyada ayaa isweydaarsada lacag, laakiin qiimayaashoodu kama dhigi doonaan dhoola caddeyn diilkaaga. Meelo badan oo ku yaal magaalada Toronto waxay aqbalaan US dollars macaamil yar - oo leh qaddar sarrif ah 1: 1 - waxaana lagula talinayaa inaad hesho xoogaa doolarka Kanada ah haddii aad lacag u isticmaali doonto. Lacagta Mareykanka badanaa waxaa lagu dhex qadayaa qadaadiicda Canadian-ka ee dukaamada maadaama ay isku muuqaal yihiin.
Thomas Cook (www.thomascook.ca) laamaha waxaa ka mid ah:
Bloor-Yorkville (+1 416-975-9940, + 1-800-267-8891; 1168 Bay St; Isniinta ilaa Jimcaha 9 AM-5:30PM; Bloor-Yonge)
Degmo Maaliyadeed (+1 416-366-1961; 10 King St E; Isniinta ilaa Jimcaha 9 AM-5PM; King)
Travelex (www.travelex.com/ca) wuxuu laamo ku leeyahay Degmooyinka Maaliyadeed (+1 416-304-6130; First Canadian Place, Bank of Montréal, 100 King St W; Isniinta ilaa Jimcaha 8 AM-5PM) iyo garoonka diyaaradaha ee Mississauga .
Adeegyada Lacagta ee Calforex (290 Queen St West) waxay siisaa qiimayaal wanaagsan oo kaash ah, iibsiga iyo iibinta GBP, USD, EUR; marka loo eego lacagaha la taaban karo waxay noqon karaan ugu yaraan 1% qiimaha bangiyada.
Laanta American Express ee Toronto waxay u shaqeysaa oo kaliya wakaaladaha socdaalka mana qabtaan macaamil ganacsi.
Shirkadaha jeega-jeexista sida Money Mart (+1 416-920-4146, meelo badan) ayaa badiyaa US ku beddeli kara CAD, laakiin sicirrada ayaa ka sii xumaanaya hay'adaha kale ee maaliyadeed.
Toronto guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Waqooyiga Ameerika magaalooyinka isla markaana muslimiinta loo helo cunno badan oo Xalaal ah. Waxay leedahay noocyo isku mid ah sida New York ama San Francisco iyo iswaafajinta iyo xasilloonida magaalada ayaa ka dhigaysa inay isku soo dhowaadaan. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu badan (haddii aysan ahayn tan ugu badan) magaalooyinka dhaqamada badan ee adduunka, Toronto waxay leedahay cunno qowmiyadeed oo sax ah sida magaalo kale oo ku taal Waqooyiga Ameerika. Way fududahay in wax laga cuno Toronto oo laga helo cunto heer sare ah oo raqiis ah.
Waxay ku wareegsan tahay dhul beereed aad u faro badan oo Koonfurta Ontario, Toronto waxay leedahay suuqyo badan oo beeraley ah - mid baa dhacaya, xilliyada, ku dhowaad maalin kasta. Dhowr suuq ayaa sanadka oo dhan ah, halka kuwa kalena ay yihiin xilliyeed, guud ahaan soconaya laga bilaabo Maajo ilaa Oktoobar.
Suuqa St. Lawrence. Waxay magaalada u keeni jirtay cunnooyinka ugufiican reer Torontoniyaanka iyo booqdayaashaba tan iyo sanadkii 1901. Waxay ku taal Jarvis iyo Front, Suuqa St. Lawrence wuxuu ku fidsan yahay 2 dhisme, dhisme weyn oo ku yaal dhinaca koonfureed ee Front St., iyo dhisme ku meel gaar ah koonfurta dhismaha weyn. Dhismaha ku meel gaarka ah wuxuu hoy u yahay Suuqa Beeraleyda, wuxuu furnaadaa Sabtida sanadka oo dhan. Waxay ka kooban tahay khudradda cusub xilligeeda, keydinta, dhir udgoon iyo geedo yaryar, iyo toos uga timaadda cuntooyinka laga helo, sida malab toos uga timaada shinnida shinnida ama sharoobada maple ee dadka taabtay oo karisay, iyo qamriyo tayo leh oo Ontaariyo ah Dhismaha weyn ee ugu weyn wuxuu leeyahay in ka badan 50 iibiyeyaal qaas ah, oo leh qeyb weyn oo ka mid ah cuntada badda, dersin hiliblayaal ah, dhowr moofo, iyo saddex dukaan oo farmaajo aad u ballaaran ah. Qeybta hoose, waxaa sidoo kale ku yaal aag gaar ah oo loogu talagalay xirfadleyda gacanta, iyo cunto-kar ballaaran, oo ay ganacsatadu inta badan karsadaan raashinka ay subaxaas cusub ka iibsadeen dabaqa sare. Dhismaha ugu weyn wuxuu furanyahay sanadka oo dhan, Tu-Th 8 AM-6PM, F 8 AM-7PP, Sa 5 AM-5PM.
Beerta Riverdale, 201 Winchester St (seddex baloog bari ka xigta Wadada Baarlamaanka). Beer soosaara sanadka oo dhan oo ay leedahay Magaalada Toronto oo qayb ka ah nidaamkeeda baarkinka ballaaran, oo maalin walba u furan dalxiisyo, waxbarasho, iyo in ka badan 9 AM-5PM. Beerta Beerta Riverdale waxay ka shaqeeyaan dukaanka iyo maqaayada, Dukaanka Beerta iyo Beerta Beerta, Simpson House (maalin kasta 10 AM-4PM), iyo Suuqa Beeraleyda toddobaadle ah (Talaado, Maajo 10 - Oktoobar, 3:30 PM-7PM. Riverdale Beertu waa beer shaqeyneysa, oo leh maqsinno iyo bannaano lagu xannaaneeyo, iyo xayawaan nooc kasta leh, isku dayga ah in la siiyo waxbarasho ku saabsan beeraha, shaqaaluhu waa loo tegi karaa, waxayna ka wada hadli doonaan howlaha marka ay ku guda jiraan howlaha maalinlaha ah ee ah in beer ay socoto. waa la heli karaa, ama waxaad ku wareegi kartaa 7½ hektar si xor ah.
Suuqyada beeraleyda kale ee Toronto:
City Hall, Fagaaraha Nathan Phillips, 100 Queen Street West. Arbacada, 1 Juun-5 Oktoobar, 10 AM-2: 30PM (marka laga reebo Juun 29 sababtoo ah Jazz Festival).
Xarunta Madaniga ee Bariga York, 850 Coxwell Ave. Talaado, 24 May-25 Oktoobar, 9 AM-2PM.
Etobicoke Xarunta Madaniga, 399 West Mall. Sabti, 4 Juun-29 Oktoobar, 8 AM-2PM.
Xarunta Madaniga ee Waqooyiga York, Mel Lastman Square, 5100 Yonge St. Khamiista, 16 Juun-20 Oktoobar, 8 AM-2PM.
Xarunta Madaniga ee Scarborough, Fagaaraha Albert Campbell, 150 Degmo Wadayaal. Jimcaha, 3 Juun-14 Oktoobar duhur-5PM.
Suuqa Beeraleyda Dufferin Grove, 875 Dufferin St (oo ka soo horjeedda Dufferin Mall). Khamiista, sanadka oo dhan (banaanka hareeraha rinkhouse xagaaga iyo xagaaga xilliga qaboobaha) 3:30 PM-7PM.
Suuqa Green Barn, 601 Christie St. Sabtiyada 8 AM-12:30PM (oo ku dhexyaala Artscape Wychwood Barns).
Degmooyinka cuntada xiisaha leh
Cabbagetown waa Degmo Taariikh ah oo loo qoondeeyay qeybta bari ee bartamaha magaalada.
Degmada Jaamacadda: qayb yar oo ka mid ah Wadada Baldwin (bariga Spadina, waqooyiga Dundas) waxay leedahay makhaayado badan oo yar yar oo bannaanka u fiican oo ku habboon qadada xagaaga.
Chinatown sidoo kale wuxuu leeyahay maqaayado badan oo Fiyatnaamiis iyo Thai ah.
Wadada King Street ee udhaxeysa Jaamacadda Avenue iyo Spadina Avenue waxay leedahay makhaayado badan oo ay ka codsanayaan dadka tiyaatarka taga.
Queen Street East ee udhaxeysa Boqortooyada iyo Leslie waxay leedahay tiro makhaayado casri ah, oo casri ah oo u dhigma vibe-ga Leslieville.
Wadada Kuleejka ee galbeedka Bathurst waxay leedahay makhaayado ka raqiisan oo caan ah oo caan ku ah ardayda jaamacadda ee ka ag dhow Jaamacadda Toronto.
Bayview Avenue koonfurta Eglinton waa meesha ay ku yaalliin qaar ka mid ah dukaanada ugu fiican Faransiiska ee rootida lagu dubo ee reer France.
Wadada Bloor ee ku taal galbeedka Spadina ee lifaaqa waxay leedahay makhaayado la mid ah kuwa loo yaqaan 'College St', oo si gaar ah isugu urursan maqaayadaha Japan ee miisaaniyadda u habboon. Makhaayadaha badankood waxay u muuqdaan kuwo dib loo dhigay.
Yorkville: waxay ku saabsan tahay in la arko marka loo eego sida dhabta ah ee wax loo cuno laakiin waxaa jira dhowr dhagax oo qarsoon, aagganna wuxuu caan ku yahay booqashada dadka caanka ah. Makhaayadaha ayaa inta badan ka qaata qiimo ahaan haddii kale cuntooyinka dhexdhexaadka ah.
Wargeyska ugu weyn magaalada, ee Toronto Star, Mar ay doorteen maxkamadda cuntada ee Suuqa Hilibka ee Downsview Park inay tahay tan ugu wanaagsan magaalada. In kasta oo ay furan tahay keliya dhammaadka usbuuca oo ay fog tahay, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo cunto dhab ah laga soo bilaabo Afgaanistaan ​​ilaa Trinidadiyaana waxaa ka maqan maqaayadaha silsiladda ah ee ku badan maxkamadaha cuntada ee magaalada. Waxay ku taal woqooyiga magaalada hoose, laakiin waxaa laga heli karaa saldhigga tareenka dhulka hoostiisa mara ee Downsview oo ku yaal khadka Spadina wuxuuna meel la wadaagaa in ka badan 400 oo tafaariiqleyaal madaxbannaan.
Barxadda Aroma Espresso. Silsiladda makhaayaddu waxay leedahay meelo magaalada oo dhan ah. Udgoonku wuxuu noqon karaa midka ugu fiican silsiladaha qaxwaha ee waaweyn ee loo yaqaan 'espresso coffe' iyo kuwa ku tartamaya tayada dukaamo badan oo kafee ah. Qaxwaha waxaa lagu siiyaa koob iyo suugada qaaddo bir ah (waxaa laga yaabaa inaadan qaadada qaadada ka helin meelaha kale), waxaadna heleysaa gabal shukulaato ah (taabasho fiican). (cusbooneysiiyay Nofeembar 2015)
Balzac's. Balzac's waa silsilad yar oo laga shaaheeyo oo ku yaal xaafadaha xiisaha leh. Waxay u adeegtaa oo kaliya dabiici ahaan, kafee Fair Trade, kookaha iyo sonkorta, caanaheeduna waa kuwo deegaanka laga helo oo dabiici ah. (la cusbooneysiiyay Jul 2020)
Degmooyinka qaarkood oo leh makhaayadaha khudradu waa Kensington-Chinatown, The Annex, iyo Chinatown East.
Halkee laga joogaa Toronto
Hoteelada iyo hoteelada badankood waxay toos uga yaalliin bartamaha magaalada. Qiimaha qolalka guud ahaan waxay u dhexeeyaan $ 150 hudheel caadi ah, $ 60-80 motel, iyo $ 20-40 sariirta hudheelka.
Toronto waxay leedahay hudheelo kala duwan oo ku habboon miisaaniyad kasta.
Toronto waxay leedahay hoteelo dhowr ah oo dhalinyaro lagu xanaaneeyo, oo ay ku jiraan kuwa ku yaal bartamaha magaalada, sida HI-Toronto hostel oo ku taal sagxadda Church Street.
Bed & Quraac
Beddelka kale ee caanka ah ee lagu caweeyo habeenkii waa sariirta & quraacda, kuwaas oo Toronto ay ku leedahay boqolaal, qaar badan oo ka mid ahna ay ku yaalliin bartamaha magaalada. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa $ 60 illaa dhowr boqol oo doolar iyadoo kuxiran guriga iyo waxyaabaha la bixiyo.
Kulliyadda Jaamacadda ee Jaamacadda Toronto
Ardayda caalamiga ahi badiyaa waxay doorbidaan inay wax ku bartaan Toronto sababta oo ah nabadgelyadeeda, u dhowaanshaha meelaha kale ee dalxiiska, iyo sicirka sarrifka wanaagsan iyo siyaasadaha fiisaha. Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo ay maqaam ahaan tahay magaalada ugu weyn dalka iyo Xarunta dhaqaalaha ee Kanada, haddana waxaa la yaab leh in jaamacadaha aysan u adeegin. La'aanta waxbarashada dugsiga sare ka dib waxay horseedday horumarinta jaamacadaha waaweyn ee magaalooyinka dhexdhexaadka ah ee ku xeeran Toronto: Jaamacadda Waterloo iyo Jaamacadda Wilfrid Laurier ee Waterloo, Jaamacadda Guelph ee Guelph, Jaamacadda McMaster ee Hamilton, Jaamacadda Brock ee St. Catharines iyo Jaamacadda Trent ee Peterborough. Jaamacadaha Toronto ayaa weli ah kuwa ugu wanaagsan dalka:
Jaamacadda Toronto. Jaamacadda ugu weyn Kanada, waxay ku faaftaa magaalada oo dhan (oo ay ku jiraan xarunta weyn ee bartamaha magaalada, xarun dhamaadka Scarborough, iyo Jaamacadda Toronto ee Mississauga (UTM) ee magaalada deriska la ah ee Mississauga). Jaamacaddan waxaa si joogto ah loogu qiimeeyaa saddexda ugu sarreysa dalka waxayna qayb ka tahay "Canadian Ivy League." Baaxaddeeda awgeed, Jaamacadda magaalada Toronto xarunteeda hoose, oo loo yaqaan 'St George campus', ka dib waddada dhex marta, waxay leedahay "aag saamayn ah", oo xaafadaha ku hareeraysan u rogeysa magaalooyin yar yar oo kulliyadeed, oo leh baarar fara badan, maqaayadaha, dukaamada buugaagta lagu iibiyo, dukaamada cuntada iyo meelaha jaban ee lagala baxo. Dhagsii xiriirka si aad uhesho hagaha U of T campus.
Jaamacadda York. Jaamacadda saddexaad ee ugu weyn Kanada, Jaamacadda York waxay leedahay laba xarumood - Keele Campus oo u dhow Keele Street iyo Steeles Avenue West oo ku taal xadka waqooyiga magaalada, iyo Kulliyadda Glendon ee asalka ah ee Lawrence Avenue East iyo Bayview Avenue. Saldhigga Jaamacadda York ee tareenka dhulka hoostiisa mara Line 1 Yonge – University wuxuu ku dhexyaalaa xerada Keele. Basaska 124 iyo 162 waxay isku xiraan Lawrence Station (sidoo kale khadka 1 Yonge – University) iyo Kulliyadda Glendon.
Jaamacadda Ryerson. Wadnaha badhtamaha magaalada. Waxay mar ahayd kulliyad farsamo, laakiin hadda waa jaamacadda saddexaad ee Toronto. Jaamacadda ayaa si gaar ah caan ugu ah iskuulkeeda maamulka, iyo barnaamijkeeda saxaafadda. Xaruntiisu waxay ku taallaa Xarunta Kerr, oo samaysa afargeesle ku wareegsan afar gees, waxay buuxisaa sagxadda ay xireen Gould, Gerrard, Victoria iyo waddooyinka Kaniisaddu. Ryerson wuxuu kaloo leeyahay dhismayaal qaybtan magaalada oo dhan, oo ay ku jiraan Dugsiga Maareynta Ted Rogers, waddooyinka Bay iyo Dundas.
Jaamacadda OCAD. Jaamacaddu waxay si gaar ah diiradda u saartaa farshaxanka iyo naqshadeynta. Xaruntu waxay ku taal Dundas Street West oo u dhaw Spadina.
Kulliyadda Seneca. Kuleejka ugu weyn Kanada wuxuu ku faafay magaalada oo leh in ka badan 16 xarumood oo kala duwan.
Kulanka George Brown. Saddex xarumood: St. James (magaalada hoose), Casa Loma (bartamaha magaalada) iyo Waterfront (Harbourfront).
Kuliyada Humber. Laba xarumood: Lakeshore iyo North.
Toronto, sida magaalooyinka kale ee Kanada, sidoo kale waxay leedahay tobanaan Ingiriisi Luqad Labaad (ESL) iskuulada. Ururka ugu weyn ee iskuulada gaarka loo leeyahay ee Ingiriisiga iyo Faransiiska waa Isbahaysiga Canadian ee Dugsiyada Luqadaha Gaarka ah.
Xaaladaha degdegga ah ee nolosha halista ku ah ama dembiga socda, garaac 9-1-1 khadka taleefanka, mobilada ama lacag bixinta (lacag-la’aan).
Wicitaanada maxalliga ah ee taleefannada lacag-bixinta waxay ku kacayaan 50 senti. Aagga wicitaannada maxalliga ah ee Toronto ayaa qiyaastii ka socda Oakville illaa Ajax; Oshawa, Hamilton iyo xaafadaha ku dhow dhow waa masaafo dheer. Wicitaanada maxalliga ah lama cabbiro, markaa waad la hadli kartaa intaad rabto. Maaddaama taleefannada gacantu ay caan ku yihiin awgeed, waxaa jira in yar oo waabab taleefannada lagu bixiyo marka loo eego sanadihii hore, sidaa darteed way adkaan kartaa in la helo. Inta badan xarumaha waawayn ee dawladu wali waxay leeyihiin taleefano ku filan oo ay isticmaalaan. Xarumaha ganacsiga, taleefannada lacag-bixintu waxay badanaa ku yaalliin inta u dhexeysa albaabbada gudaha iyo dibedda ee laga soo galo. Telefoonnada lacag-bixinta ayaa sidoo kale si joogto ah loogu bixiyaa saldhigyada tareennada dhulka hoostiisa mara ee TTC, oo ay ku jiraan meheradaha, iyada oo ah astaamo nabadgelyo. Adeegga moobaylka guud ahaan lagama heli karo tareenka dhulka hoostiisa mara, marka laga reebo meelaha bannaanka ah ama dhulka ka sarreeya. Meelaha kale ee dhulka hoostiisa ah, sida heerarka hoose ee suuqyada iyo PATH, soo dhaweynta guud ahaan waa la heli karaa, haddii xoogaa daciif ah.
Intaas waxaa sii dheer, xarumo badan oo dadweyne (sida suuqyada laga dukaameysto) ayaa hadda sidoo kale leh taleefano bixiya wicitaano maxalli ah oo bilaash ah, kuwaas oo lagu maalgeliyo xayeysiisyada ku shaqeeya shaashadaha midabka LCD. U fiirso olal waaweyn oo darbiyada ku dheggan meelaha taraafikada badan.
Toronto waxay leedahay seddex aag oo kala ah: 416, 647, iyo 437. Xeerarkan aagagga ah dhammaantood waxay la xiriiraan aag juqraafiyeed isku mid ah. Meelaha hareeraha magaalada ka baxsan waxay leeyihiin seddex aagag is dul saaran: 905, 289, iyo 365. Sidaas darteed, Toronto waxay leedahay 10-lambar garaac maxalli ah. Waa inaad markasta garaacdaa nambarka aagga oo qayb ka ah lambarka aad iskudayeyso inaad gaarto.
Kaararka wicitaanka ee caalamiga ah ayaa si ballaadhan looga heli karaa waddamo badan qiime macquul ah. Maaddaama wicitaannada masaafada dheer ee lacagta lagu bixiyo ay qaali yihiin (Telefoonnada loo yaqaan 'Bell payphones' waxay qaadanayaan ku dhowaad $ 5 daqiiqadda ugu horreysa iyo qiime ka hooseeya intaas ka dib, tartameyaashu waa $ 1 saddex daqiiqo), haddii ay tahay inaad wicitaannada taleefannada ka soo diro qollada taleefannada, waxaa fiican inaad iibsato kaararka lacag bixinta.
Kafee Internetka ee Toronto
Toronto waxay leedahay makhaayado internet oo badan, gaar ahaan Yonge Street agagaarka Bloor iyo sidoo kale Bloor Street oo u dhexeeya Spadina iyo Bathurst, in kasta oo tiradooda ay hoos u dhacayso. Inta badan hoteellada waaweyn waxay ku bixiyaan qolladooda iyo Xarumahooda ganacsi Internet-xawaare sare leh. Inta badan dukaamada qaxwada, dhawr xabbadood oo hamburger ah iyo maxkamado cunto iyo makhaayado badan oo magaalada ku yaal ayaa bixiya internet -ka wireless -ka ah (badiyaa waa bilaash, marmarna ma aha). Booqashooyinka soo noqnoqda ee magaalada, kafeega Internet-ka ee aad isticmaashay markii ugu dambaysay badanaa wuu baaba'aa, oo ah dhaawac Internet aad u baahsan oo meel kale laga helay. Markaad hesho meel aad ku wacdo guriga, kharashyadu caadi ahaan waa qiyaastii $ 3 muddo 30 daqiiqo ah.
Adeeg internet oo bilaash ah ayaa laga heli karaa kombiyuutarada Maktabada Dadweynaha ee Toronto laamaha, iyo Maktabada Tixraaca Toronto sidoo kale waxay bixisaa marin-u-helitaan bilaash ah labada dabaq ee hore.
Dhammaan xarumaha tareenka dhulka hoostiisa mara ee TTC waxay leeyihiin Wi-Fi bilaash ah; adeegga xayeysiiska ku saleysan wuxuu adeegsadaa magaca shabakadda TCONNECT. Ka eeg TTC wi-fi bogga wixii faahfaahin dheeraad ah.
Guud ahaan shaambadaha ayaa la iibsadaa oo baakadaha ayaa la miisaamaa oo la raraa, boosteejo ku taal dukaanka tafaariiqda sida dukaamo kala duwan ama dukaanka daroogada. Waxay umuuqataa in inta badan dukaamada daroogada Mart dukaamadu ay leeyihiin boosteejo boosteejo ah oo laga soo iibsado gaar ahaan badiyaa gadaashiisa. Boostada ayaa laga yaabaa inay iibiso waxyaabaha samafalka ah (arrimaha dhowaan kaliya).
Toronto Star, wargeys maalinle ah oo baaxad leh, siyaasad ahaan ka hadhay Xarunta, oo tebinaya wararka maxalliga ah, kuwa qaranka, iyo kuwa adduunka. Iskuduwaha Superman Joe Shuster, oo mar soo gudbiyay warqaddan, ayaa u adeegsaday Dhismihii Hore ee Toronto Star (oo aan sii jirin) isagoo u waxyoonay wargeyska "The Daily Planet".
Qorraxda Toronto, wargeys maalinle ah oo tabloid ah, siyaasad ahaanna muxaafid ah, kana hadlaya wararka maxalliga ah, kuwa qaran, iyo kuwa adduunka.
The Globe and Mail, war-baahin qaran oo maalinle ah oo daabacaadda maxalliga ah, laguna daabaco Toronto. Ganacsi ballaadhan iyo daboolida suuqyada saamiyada, siyaasad ahaan udub dhexaad.
Post Qaranka, war-baahin qaran oo maalinle ah, dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Star Metro Toronto, maalin kasta oo bilaash ah, oo leh maqaallo kooban oo ka hadlaya wararka maxalliga, qaranka, iyo adduunka, oo laga heli karo saldhigyada dhulka hoostiisa mara ee leh joornaalada wargeysyada, iyo meelo yar oo ka baxsan saldhigyada dhulka hoostiisa mara. Inta badan waa wax ka dhashey ah Toronto Star, oo siyaasad ahaan uga hadhay Xarunta.
Wargeysyada toddobaadlaha ah ee bilaashka ah, ee laga qeybiyo sanduuqyada ku yaal geesaha waddooyinka iyo dukaanno ku yaal dukaamada iyo maqaayadaha ayaa ah ilo wanaagsan oo laga helo shineemooyinka, cuntada, muusikada, tiyaatarka, iyo dhacdooyinka kale iyo sidoo kale wararka maxalliga ah:
Hadda warar kale iyo liisas dhameystiran; la daabacay Khamiista.
Xtra!, kaas oo bixiya wararka iyo liisaska khaniisiinta iyo liisaska, ayaa joojiyay daabacaadda daabacaad daabacan, laakiin waxay ku sii socotaa khadka tooska ah.
Waxay kuxirantahay meesha aad kahesho Toronto, waxaad awoodi doontaa inaad hesho wargeysyo gudaha kasoo baxa oo luuqado kaladuwan kuqoran. Tusaale ahaan, magaalada Chinatown, waxaad ka heli doontaa wargeysyo shiineys ah. "Talyaani yar", waxaad ka heli doontaa wargeysyo Talyaani ah. Sidoo kale waxaad ka heli doontaa wargeysyo ku qoran Faransiis, Isbaanish, Boortaqiis, Beershiyaan, Carabi, Taagalog, Griig, Urdu iyo kuwo kaloo badan.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka ka dhaca Toronto
Toronto si la yaab leh ayey u nabad tahay jidadkeeduna waa kuwo firfircoon oo ay socdaan dad lugeynaya iyo baaskiillayda, xitaa habeenkii xaafadaha badankood. Haddii aad isticmaasho caqliga saliimka ah, waa inaadan wax dhib ah haba yaraatee lahayn.
Heerka guud ee dambiyada rabshadaha ka dhaca Kanada, iyo gaar ahaan Toronto, ayaa aad uga hooseeya tan laga helo magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Dembiyada fudfudud guud ahaan dhib kuma aha Toronto, laakiin sida had iyo jeer dhacda, ka feejignow hantidaada. Xatooyada baabuurta iyo baaskiillada ayaa la barbar dhigi karaa magaalooyinka kale ee waaweyn ee Waqooyiga Ameerika.
Waxaa jira xaafado lagu yaqaan warbaahinta iyo dariiqyada inay yihiin kuwo ka khatar badan, in kasta oo tirakoobka booliska aan inta badan loo isticmaalin in lagu caddeeyo caqiidooyinkaas. Si kastaba ha noqotee, iyada oo weerarada iyo dambiyada kale ay ka dhici karaan meel kasta, gaar ahaan goor dambe oo habeen ah oo dad yar ay ku dhow yihiin, waxaa macquul ah in laga fogaado meelaha qaarkood (markale, guud ahaan xilli dambe habeenkii). Meelahan waxaa ka mid ah magaaladii hore iyo xaafadaha hoose: Crescent Town, Regent Park, qaybo ka mid ah Parkdale, qaybo ka mid ah St. Jamestown, Moss Park, Alexandra Park, Flemingdon Park / Victoria Village iyo Weston-Mount Dennis. Meelaha dibedda: Jane iyo Finch (“Jane Corridor”), Lawrence Heights, looska (ie, Don Mills and Sheppard), Rexdale / Jamestown Crescent, Malvern, Kingston and Galloway, Steeles-L'Amoureaux, Dorset Park, Westminster-Branson iyo Beerta Xaraashka ee Eglinton East-Kennedy Park. Ka fogow aagagga ugbaad doonka ah, ee daroogada, dhillaysiga iyo dembiyada rabshadaha sida dhaca hubeysan ay ka dhici karaan. Xaafadahaani waxay si muuqata uga sii darayaan xagga aragtida, iyagoo siinaya digniin ku filan inay rogtaan.
Toronto waxaa ku nool dad aan hoy lahayn oo muuqda, qaar badan oo ka mid ahna waxay ku weydiin doonaan lacag. Dawarsadayaasha ku nool Toronto ayaa lagu yaqaan inay weydiistaan ​​wax la siiyo iyagoo marmarsiinyo ka dhiganaya inay u baahan yihiin qiimaha TTC (Guddiga Transit ee Toronto). Markii la siiyo astaamaha TTC, way aqbali doonaan iyaga ka dibna waxay u dhowaan doonaan dadka kale ee jidka maraya iyagoo isku dayaya inay ku iibiyaan astaamahan lacag ahaan. Haddii qof dariiqa ah uu kuu soo bandhigo inuu kaa iibiyo calaamo ay ku andacoodaan inay "ka heleen" Toronto, mararka qaarkoodna ka qiimo yar qiimaha wajiga, waa macquul in qiimahan warbaahinta ay siiyaan qaar ka mid ah dadka caqliga wanaagsan ee jidka maraya oo aaminsan sheegashadooda beenta ah waxay u baahdeen lacag TTC ah si ay guriga ugu noqdaan.
Waxa kale oo jiray marar la soo dhaafay “caruurta wax iskuda” oo u booda isgoysyada marka taraafikada laga joojiyo laydhadhka isla markaana ka codsada lacag nadiifinta muraayadaha hore. Tani waxay noqoneysaa mid aan caadi aheyn maadaama foomkaan faragalinta ah ee taraafikada uu si cad sharci daro ugu yahay sharciga Ontario ee Wadooyinka Wadooyinka waxaana laga yaabaa in lagu dacweeyo booliska.
Ka taxaddar marka aad ka degayso bajaajleyda oo had iyo jeer fiiri dhinaca midig intaadan gaariga ka bixin. In kasta oo ay tahay inay istaagaan baabuurtu markay albaabbada basku furmaan, haddana qaar ka mid ah wadayaasha iyo baaskiiladlaydu way iska indha tirayaan tan oo way sii wadayaan.
Faafitaanka aaladaha xogta moobiilka ayaa horseeday "howlo badan" boqolkiiba tiro badan oo dadka lugeynaya ee magaaladan. Haddii aad baabuur wadid, baaskiil wadid, ama xitaa aad lugaynayso, Toronto ha iloobin inaad isha ku hayso qof lugeynaya oo laga yaabo inuu diirada saaro qalabkiisa.
Ka fogow webiga / webiyada ama buundooyinka hoostooda inta lagu jiro xilliyada roobka xad-dhaafka ah, inta lagu jiro / ka dib onkodka culus ama barafka dhalaalaya. Daadku wuxuu jilcin karaa carrada wuxuuna sababi karaa inuu si lama filaan ah ugu soo dumo biyaha culeys kasta ha lahaadee.
Mararka qaarkood, Toronto waxaa ku dhici doona duufaan daran oo jiilaal ah oo ay weheliso baraf weyn (oo badanaa lagu qaso roob qabow / baraf / qabow). Iska ilaali inaad baabuur wadid inta lagu jiro iyo isla markaaba dabeylaha haddii ay suuragal tahayba. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay kuwa aan aqoon u lahayn kaxaynta jiilaalka iyo xakamaynta baabuurka taraafikada. Qaad tareen dadweyne, soco, ama gudaha joog.
Xafiiska Xiriirka Caalamiga iyo Habmaamuuska
Xafiiskani wuxuu maamulaa isdhexgalka Dowladda Ontario ee qunsuliyadaha ugu waaweyn Kanada (iyo mid ka mid ah kuwa adduunka ugu weyn). Qiyaastii 100 waddan ayaa wakiil uga ah Toronto.
Brazil, 77 Bloor Street West, Suite 1109,,, fax: + 1 416 922-1832.
Shiinaha, 240 St. George St.
El Salvador, 151 Bloor Street West, Suite 320,,, fax: + 1 416 975-0283.
Greece, 365 Bloor Str. - Bariga, Suite 1800,, fax: + 1 416 515-0209.
Hindiya, 365 Bloor Street East. Isniinta ilaa Jimcaha 9AM ilaa 11:30 AM.
Italy, 136 Beverley St,, fax: + 1 416 977-1119.
Japan, 77 King St West Suite 3300.
Macedonia, 90 Eglinton Ave. East, Suite 210,, fax: + 1 416 322-2412.
Netherlands, 1 Dundas St W, Suite 2106, lacag la'aan: + 1-877-DUTCHHELP (388244357), fax: + 1 416 598-8064.
Koonfur Afrika, 110 Sheppard Ave E, Suite 600, Waqooyiga York,, fax: + 1 416 944-0925.
Russia, 175 Bloor Street East, Koonfurta Tower, Suite 801,, fax: + 1 416 962-6611. Isniinta ilaa Jimcaha 9:30 AM ilaa 12:30 PM.
Boqortooyada Ingiriiska, 777 Bay St, Suite 2800,, fax: + 1 416 593-1229.
United States, 360 Jaamacadda Ave,, fax: + 1 416 595-1090. 9 AM-1PM.
Toronto waa bar bilow weyn ee sahminta koonfurta Ontario. Waxaa jira dahab badan xeebaha ciidda hareeraha biyaha nadiifka ah ee harooyinka waaweyn ee ku habboon maalmaha xagaaga kulul. Meelaha caanka ah ee xeebta loo tago 1½-2½ saacadood gudahood ee Toronto waxaa ka mid ah Wasaga, Bruce County (Ontario), Sandbanks, Grand Bend, Long Point, iyo Turkey Point.
Jasiiradda Niagara - Gobol cufan oo caan ku ah ugu horreeynta geedaheeda canab iyo beero canab ah iyo waliba qulqulka biyo-dhaca on Niagara Falls iyo magaalada quruxda badan ee Niagara-on-the-Lake. Dhinaca Mareykanka ee Falls waxaa ku yaal dhowr xarumood oo laga baxo. 1-1½ saacadood koonfurta dhanka QEW; basas yar oo dalxiis ah ayaa sameeya isla maalintaas safarka soo noqoshada.
Buffalo - Qaab dhismeedka hore ee quruxda badan ee qarnigii 20-aad oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shaqooyinka Frank Lloyd Wright iyo matxafyo aad u fiican ayaa 1½ saac u jira magaalada Toronto.
Niagara Escarpment - Nolosha adduunka, oo ay ilaalinayso waajibaadka UN-ka ee ka imanaya Niagara Falls galbeed ilaa Hamilton ka dibna woqooyi ilaa Georgia Georgiya. Waxay ku daboolan tahay kaymo leh aragtiyo dhaadheer oo dhaadheer oo ku teedsan jidka loo yaqaan 'Bruce Trail' oo xadka cidhifka galbeed ka sameeya aagga Greater Toronto, meesha ugu dhowna waxay qiyaastii u jirtaa ½-saac baabuur ka socota dhinaca galbeed ee dhammaadka Toronto.
Gobolka Waterloo - Aaggan 1-1½ saacadood galbeedka galbeed ee Toronto wuxuu leeyahay xarumo jaamacadeed oo waaweyn, buuro rogaal celis ah iyo dhaqanka Mennonite.
Stratford - magaaladan quruxda badan 2 saacadood galbeedka magaalada Toronto ayaa martigalin doonta xaflada caanka ah ee aduunka looga yaqaan Stratford Shakespeare (Abriil – Noofambar).
Kun Jasiiradood iyo Kingston - Aaggan muuqaalka ah iyo magaaladeeda taariikhiga ah ee dhow waa 3 saacadood bari, oo loo maro Ottawa
Ottawa - Caasimadda Kanada waxay qiyaastii u jirtaa 4½-saac oo baabuur wadis ah oo ka timaadda Toronto.
Wadada weyn ee Streetville, oo ku yaal magaalada hareeraheeda kaslena waqooyiga Toronto, waa tuulo taariikhi ah oo horumarsan sanadihii 1840-yadii. Sida caadiga ah ee tuulo yar, waxay leedahay dhismayaal xilliyo badan oo isku mid ah oo ku yaal hareeraheeda.
Muskoka, Saddex Xagalka Georgia iyo Kawarthas - Dhammaan 1½-2 saacadood ee woqooyi waa aagagga waddanka oo buul ku yaal leh dhul dhagax iyo dalcadeed badan leh oo leh boqollaal harooyin iyo biyo mareenno ah. Muskoka iyo Kawarthas waxaa caan ku ah dalxiiskooda, aqallada, meelaha loo dalxiis tago / meelaha loo dalxiis tago, jardiinooyinka gobolka, iyo hawlo badan oo bannaanka ka mid ah oo ay ka mid yihiin kaamayn, kalluumeysi / ugaarsi, barafaynta barafka, u fiirsashada dabeecadda, iyo tamashlaha u dhexeeya quruxda dabiiciga ah. Aagga Georgian Bay waa halka ay dhulka buuraleyda ah iyo buuraha Niagara Escarpment ay ku kulmaan xeebaheeda, aagga ayaa leh xarumo caan ku ah barafka oo had iyo jeer lagu qarxiyo qaddar baraf badan laakiin xeebta Wasaga Beach, khamriga iyo golf-ka ayaa ah xulashooyinka xagaaga.
Newmarket waxay leedahay Degmo dhowrista dhowrista dhaxalka ee Main Street iyo dhismayaal fara badan oo dhaxal gal ah oo ku dhex yaal aag lugayn kara.
Dad badan ayaa booqda gobolladan dayrta si ay ula kulmaan kuwa ugu fiican caleemaha midabka dhaca meel kasta oo adduunka ah.
Guriga Galbeedka Ugu Fiican Hill Georgetown
Hoteelka Ugu Wanaagsan Western Parkway Toronto North
Ugu Fiican Western Plus Executive Inn Toronto
Hoteelka ugu wanaagsan Western Plus Roehampton & Suites Toronto
Hoteelka Madaarka Galbeed ee Galbeedka Galbeed ee ugu Fiican
Hoteelka ugu Fiican Western Plus Airport Airport Toronto
Hoteelka Galbeedka Fiidiyow ee ugu Fiican Magaalada-Toronto
Canadas Qiimaha ugu Fiican Inn Richmond Hill - Waqooyiga Toronto
Canadas Qiimaha ugu Fiican Magaalada Toronto
Madaarka Hoteelka Raaxada Waqooyiga Toronto
Hoteelka raaxada ee magaalada hoose - Toronto
Raaxada Inn & Qolalka Barrie
Raaxada Inn Airport Galbeedka Toronto
Raaxada Inn Downsview
Raaxada Inn East Toronto
Raaxo Inn Meadowvale
Raaxo Inn Toronto Northeast
Barxadda By Marriott Toronto Airport Hotel
Barxadda By Marriott Toronto Hotel
Barxadda Hotel Toronto Vaughan
Maalmaha Hoteelka & Xarunta Shirarka ee Garoonka Diyaaradaha ee Bariga Bari
Maalmaha Hoteelka & Xarunta Shirarka-Toronto Don Valley
Days Inn East Xeebaha Toronto
Maalmaha Inn Toronto East Lakeview
Delta Meadowvale Hotel & Xarunta Shirarka Toronto
Ku muuji Holiday Inn Downtown Toronto
Afar Dhibcood By Garoonka diyaaradaha ee Sheraton Toronto
Afarta xilli ee Toronto At Yorkville
Hampton Inn & Suites ee garoonka diyaaradaha Hilton Toronto
Hampton Inn Waxaa Yimid Xarunta Shirkada Diyaaradaha ee Hilton Toronto
Hampton Inn Waxaa qoray Hilton Toronto Mississauga
Hampton Inn Waxaa qoray Hilton Toronto-Mississauga West
Hilton Garden Inn Xarunta Magaalada Toronto
Hoteelka Hilton Toronto Hotel & Suites
Holiday Inn Express Toronto Waqooyiga York
Holiday Inn Express Toronto-Airport Aagga Mississauga
Holiday Inn Mississauga Toronto Galbeed
Holiday Inn Toronto Xarunta Magaalada
Holiday Inn Toronto-Airport-ka Bari
Holiday Inn Toronto-International Airport
Suugaanta Homewood Waxaa Hoteelka Hilton Toronto ee Xarunta Corporate Center
Homewood Suites Waxaa Qoray Hilton Toronto-Markham Hotel
Homewood Suites waxaa qoray Hilton Toronto-Mississauga
Hoteelka Indigo Toronto Airport
Hoteelka Hoteelka Novotel Toronto
Hoteelka Novotel Toronto Xarunta Mississauga
Howard Johnson Inn & Suites Toronto Bariga
Xarunta Intercontinental Hotel Toronto
Hotelka InterContinental Toronto Yorkville
Hotel Isabella & Suites Toronto
Maryam Hotel Waqooyiga York
Xarunta Pantages Hotel Toronto
Hoteelka Park Hyatt Toronto Yorkville
Tayada Inn & Suites Airport Mississauga
Tayada Madaarka Tayada Madaarka Galbeedka Toronto
Tayada Suites Airport ee Toronto
Degenaanshaha Madaarka Toronto
Degenaanshaha Magaalada Toronto Degmada Madadaalada
Hoyga Inn Toronto Markham
Saxiixa Sandman Hotel Airport Toronto
Xarunta Sheraton Center Toronto
Sheraton Gateway Hotel Gagada Diyaaradaha Caalamiga ee Toronto
Hotel Sheraton Toronto & Xarunta Shirarka
Sitbridge Suites Toronto Mississauga Hotel
Super 8 Toronto Waqooyiga On
Hotelka Fairmont Royal York Toronto
Hotelka Grange Toronto
Hoteelka Hazelton Toronto
Hoteelka King Edward ee Toronto
Huteelka Ritz-Carlton Toronto
Hoteelka Strathcona Toronto
The Westin Bristol Place Airport ee Magaalada Toronto
Qasriga Westin Harbor Toronto
Gagada Diyaaradaha Toronto Airport Marriott
Gegada diyaaradaha ee Toronto, Dixon Road Travelodge Hotel
Hoteelka Toronto Marriott Bloor Yorkville
Travelodge Toronto Toronto
Hotel Woodbine & Suites Toronto
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Kanada > Xalaal Safarka Toronto